ချစ်လိပ်ပြာ အချစ်စာပေ: ညတာရှည်မဲ့ ည ( အချစ်ဝတ္ထု ) 18 +
အပြာကား HD အလန်းလေးတွေကြည့်ချင်ရင် အောက်ပုံကိုနှိပ်ပါ..
ညတာရှည်မဲ့ ည ...
ဆောင်း တွင်း မို့ စောင် ခြုံ ပြီး ကွေး လို့ကောင်း ချိန် နာ ရီ နှိုး စက် က အ လိုက် မ သိ ထ မြည် သည်..။ ဖေ ၀င်း မောင် အိပ် ရာ က လူး လဲ ထ တယ် ။။ဖေ ၀င်း မောင် နောက် လ ဆို အ သက် ၄၅ နှစ် ပြည့်မှာ ဖြစ် ပါ တယ်...။ အိမ် ထောင် သက် နှစ် ၂၀ ရှိ လာ ပြီး သ မီး ကြီး က ၁၉ နှစ် သား အ ငယ် က ၁၇ နှစ် ဖြစ် လာ တဲ့အ ချိန် မ ယား ဖြစ် တဲ့ခိုင် ချို မာ လဲ သား သ မီး တွေ အရွယ် ရောက် လာ လို့က တ ကြောင်း သူ မ က လဲ တ ဖက် တ လမ်း က စီး ပွါး ရှာ နေ ပြီး လူ ရော စိတ် ပါ ပင် ပန်း လို့က တ ကြောင်း ဆို တဲ့ဆင် ခြေ တွေ နဲ့ ဖေ ၀င်း မောင် နဲ့မ အိပ် တော့ ...။
ဆောင်း တွင်း မို့ စောင် ခြုံ ပြီး ကွေး လို့ကောင်း ချိန် နာ ရီ နှိုး စက် က အ လိုက် မ သိ ထ မြည် သည်..။
ဖေ ၀င်း မောင် အိပ် ရာ က လူး လဲ ထ တယ် ။ သူ့လုံ ချည် အောက် က ဖွါး ဖက် တော် က မတ် မတ် တောင် နေ တယ်..။ရေ ချိုး ခန်း ကို ပြေး ပြီး သွား တိုက် မျက် နှာ သစ် ပြီး သည် တိုင် ဖွား ဖက် တော် က ကျ မ သွား သေး..။ဖေ ၀င်း မောင် နောက် လ ဆို အ သက် ၄၅ နှစ် ပြည့်မှာ ဖြစ် ပါ တယ်...။
အိမ် ထောင် သက် နှစ် ၂၀ ရှိ လာ ပြီး သ မီး ကြီး က ၁၉ နှစ် သား အ ငယ် က ၁၇ နှစ် ဖြစ် လာ တဲ့အ ချိန် မ ယား ဖြစ် တဲ့ခိုင် ချို မာ လဲ သား သ မီး တွေ အရွယ် ရောက် လာ လို့က တ ကြောင်း သူ မ က လဲ တ ဖက် တ လမ်း က စီး ပွါး ရှာ နေ ပြီး လူ ရော စိတ် ပါ ပင် ပန်း လို့က တ ကြောင်း ဆို တဲ့ဆင် ခြေ တွေ နဲ့ ဖေ ၀င်း မောင် နဲ့မ အိပ် တော့ ...။ လိင် ဆက် ဆံ တာ မ ရှိ တော့ ..။
ခိုင် ချို မာ့ကို အ ကျိုး အ ကြောင်း နဲ့ရှင်း ပြ ပေ မဲ့ဂ ရု လုံး လုံး မ စိုက်..။ ဖေ ၀င်း မောင် သူ မ ကို ဘယ် တော့မှ ဖေါက် ပြန် မှာ မ ဟုတ် ဘူး လို့သူ မ ထင် နေ သ လို ( ရှင့်မှာ အ ပြာ ဗွီ ဒီ ယို တွေ ရှိ နေ တာ ဘဲ..ရှင် ကွင်း ထု ပြီး အာ သာ ဖြေ လိုက် ပေါ့ ....ရှင်..) လို့ခပ် ပေါ့ပေါ့ဘဲ သူ့ကို ပြန် ပြော ခဲ့တယ်...။ လိင် မ ဆက် ဆံ ရုံ တင် မ က တ ခန်း ထဲ တောင် မ အိပ် လို တော့ ..။ ဖေ ၀င်း မောင် လဲ ခိုင် ချို မာ ရဲ့ဖြစ် စေ ချင် တဲ့အ တိုင်း ..သူ မ နဲ့သူ လက် ထပ် ပြီး က ထဲ က အ တူ အိပ် ခဲ့တဲ့တိုက် အ ပေါ် ထပ် က အိပ် ခန်း ကြီး က နေ တိုက် အောက် ထပ် က အ ခန်း တ ခန်း မှာ ပြောင်း နေ လိုက် တယ် ..။ ခိုင် ချို မာ က ဖေ ၀င်း မောင် ထက် ၅ နှစ် ကျော် ငယ် တယ် ..။ အ သက် ၄၀ အ ရွယ် တောင့်တင်း စို ပြေ တုံး..။ လိင် ဆက် ဆံ ဖို့ကောင်း နေ ဆဲ အ ရွယ် ပါ..။ တ ကယ် တော့ခု လို ဖြစ် မဲ့သာ ဖြစ် တာ..။ သူ နဲ့ခိုင် ချို မာ လက် ထပ် ခါ စ က ဆို ရင် တ နေ့ကို ခု နစ် ချီ အ ထိ လိုး ခဲ့ကြ တာ ပါ..။ ခိုင် ချို မာ က သူ လိုး ချင် ရင် ဘယ် တော့မှ မ ငြင်း တဲ့အ ပြင် ....သူ့စိတ် တိုင်း ကျ အား လုံး လုပ် ပေး..နေ ပေး ပြီး ပု လွေ က လဲ ဘာ ကောင်း သ လဲ မ မေး နဲ့...ဆို တာ မျိုး ပေါ့ ..။ တ ခါ တ လေ..ခိုင် ချို မာ လဲ လို ချင် လာ ရင် ဖေ ၀င်း မောင် ကို သူ က ဘဲ စ ပြီး လိုး ဖို့တောင်း ဆို ခဲ့တယ်..။ လိုး ခိုင်း တယ်..။ ဒါ ပေ မဲ့...အ ချိန် ကြာ လာ တော့ခိုင် ချို မာ ပြောင်း လဲ လာ တော့တာ ဘဲ..ဖေ ၀င်း မောင် က တော့အ သက် ၄၀ ကျော် မှာ သန်း တုံး မြန် တုံး..စိတ် တွေ က ထန် တုံး ..။ ယောင်္ကျား ဆို တာ ဖွဲ တ ဆုတ် နိုင် သည် အ ထိ ကာ မ စိတ် က ရှိ ကြ တယ် လို့ရှေး လူ ကြီး တွေ ပြော ကြ သ လို ပါ...။ သူ့သူ ငယ် ချင်း ( ထွန်း မြင့်ကျော် ) က မင်း တို့၂ ယောက် ကိ စ္စ က တိမ် မ ယောင် နဲ့နက် နေ ပြီ.....ခိုင် ချို မာ လုပ် တာ ကြောင့်မင် က တ ယောက် ယောက် နဲ့ညိ ပြီး ( အ ပျက် ပျက် နဲ့နှ ခေါင်း သွေး ထွက် ) ဆို တာ ဖြစ် တော့မယ် လို့တွေ့တိုင်း လို ပြော တယ်..။ ဒီ အ တွက် နဲ့ရန် ဖြစ် ရင် လဲ လူ ကြား လို့မ ကောင်း ဘူး လေ..။ က လေး တွေ က လဲ ကြီး နေ ကြ ပြီ..။ ဒီ အ တွက် နဲ့လင် မ ယား ကွဲ ဖို့ဆို တာ က လဲ လိင် ကိ စ္စ ကို ရှေ့တန်း တင် နေ သ လို ဖြစ် တာ ရယ်..သား သ မီး တွေ ကြား လို့မ တော် တာ ရယ် တွေ ကြောင့်ဖေ ၀င်း မောင် လဲ ကွဲ ဖို့မ စဉ်း စား ချင် ဘူး..။ ဒါ တွေ ကြောင့်သူ လဲ အ သက် ကြီး ကာ မှ ( ကွင်း သ မား ) ဘ ၀ ပြန် ရောက် နေ တယ်...။ အေ အိုင် ဒီ အက်စ် ရော ဂါ က လဲ ဘာ ပြန့်နှံ့သ လဲ မ မေး နဲ့ ..။ အ သိ မိတ် ဆွေ တွေ ထဲ မှာ တောင် အဲ ဒါ နဲ့သေ ဆုံး ခဲ့တာ တွေ ကြား နေ ရ တယ်....။ ဒါ ကြောင့်ဖေ ၀င်း မောင် ဖါ လဲ မ ချ ချင်...။ သိပ် ပြီး ကာ မ စိတ် ပြင်း ထန် လာ ရင် မိ မိ ဖါ သာ ဘဲ ကွင်း တိုက် ပြီး အာ သာ ဖြေ နေ ရ တယ်...။ ကြာပြီ...။ ဖေ ၀င်း မောင် က သူ နိုင် ငံ ခြား မှာ နေ ခဲ့တုံး က လေ့လာ ခဲ့တဲ့အ တွေ့အ ကြုံ တွေ နဲ့ကြက် ကြော် Fried Chicken ဆိုင် စမ်း လုပ် ကြည့်တာ ( ပေါက် ) သွား ခဲ့လို့တ ဆိုင် ပြီး တ ဆိုင် ဖွင့်လာ နိုင် ခဲ့လို့စီး ပွါး ရေး လော က မှာ အောင် မြင် တဲ့လူ တ ယောက် လို့ဆို နိင် ပါ တယ် .။ ခိုင် ချို မာ က တော့မိ ဘ လက် ထက် က နယ် မှာ ( ကုန် စုံ ဆိုင် ) ဖွင့်တာေ၇ာင်း တာ အ တွေ့အ ကြုံ ရှိ ခဲ့တာ မို့ဖေ ၀င်း မောင် စီး ပွါး အ ဆင် ပြေ လာ တဲ့အ ခါ သူ မ လဲ အ လုပ် လုပ် ချင် တယ် ဆို ပြီး ပူ စာ တာ နဲ့( Mini Market ) တ ဆိုင် ဖွင့်ပေး ရ တယ်..။ သူ့ငယ် သူ ငယ် ချင်း ( ထွန်း မြင့်ကျော် ) နဲ့အ လုပ် အား ရင် ( ကာ ရာ အို ကေ ) ဆိုင် တွေ ကို ရောက် တတ် ပေ မဲ့အဲ ဒီ က ကောင် မ လေး တွေ နဲ့ပွတ် သီး ပွတ် သပ် လုပ် ရင် စိတ် က ပို ကြွ ပြီး မိန်း မ လိုး ချင် စိတ် က ပို များ လာ တတ် တယ်...။ အ နှိပ် ခန်း တွေ သွား တာ လဲ ဒီ လို ဘဲ..။ ( ထွန်း မြင့်ကျော် ) က လဲ ဖေ ၀င်း မောင် သူ့ကို ဖြစ် ကြောင်း ကုန် စင် ရင် ဖွင့်တော့( မင်း တ ယောက် ထဲ မ ဟုတ် ဘူး..သူ ငယ် ချင်း....ငါ လဲ ဒီ လို ပါ ဘဲ ငါ့မိန်း မ လဲ အိမ် ထောင် သက် ကြာ လာ တော့မ ပေး တော့ဘူး...ဒါ ကြောင့်ဒို့တ တွေ လဲ ချာ တိတ် မ တ ယောက် စီ လောက် တော့ရှာ သင့်ပြီ... ..) လို့ပြော ခဲ့တယ်...။ ဒါ ကြောင့်လဲ အ သက် ကြီး တဲ့လူ တွေ က မိန်း မ က လဲ အ နား ကပ် မ ခံ တော့တာ ကြောင့်တိတ် တိတ် ပုံး ကောင် မ လေး တွေ ON THE SIDE ထား ကြ တာ ပေါ့..ကောင် မ လေး တွေ က လဲ ( အ ကို အောင်...အ ကို အောင်..) ဆို ပြီး ဘူ တါး ကြီး တွေ နား ဆို တ အား ကပ် တယ်.....အ ကို အောင် ဆို2တာ သိ လား...... ( ထွန်း မြင့်ကျော် ရာ ....ကိုယ် လဲ ဒီ လောက် မ ညံ့သေး ပါ ဘူး ....( အ ကို အောင် ) ဆို တာ ( အ ကောင် အို ) လို့ဆို လို တာ မ ဟုတ် လား.........ဟား...ဟား.....) ဖေ ၀င်း မောင် ဒီ နေ့အ လုပ် ကို စော စော သွား ရ သည်..။ သူ့ရဲ့ဆိုင် တ ဆိုင် မှာ အ လုပ် သ မား သစ် တွေ ခန့်ဖို့လို လာ တဲ့အ တွက် အင် တာ ဗျူး လုပ် စ ရာ ရှိ လို့စော စော သွား ရ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ..။ သူ ပ ထ မ ဆုံး ဖွင့်လို့စ ပြီး နာ မည် ရ လာ တဲ့ဆိုင် ခန်း ရဲ့ အ ပေါ် ထပ် မှာ သူ ( အုပ် ချုပ် မှု ရုံး ခန်း ) ဖွင့်ထားပြီး လူ ခန့်တဲ့အင် တာ ဗျူး လုပ် တာ တို့ ..စာ ရင်း အင်း ကိုင် တွယ် တာ တို့ .. ကို အဲ ဒီ ရုံး ခန်း မှာ လုပ် ပါ တယ်..။ရုံး ခန်း အ တွင်း ဖက် မှာ လဲ အိပ် ခန်း အ သေး စား လေး တ ခန်း နဲ့ရေ ချိုး ခန်း..အိမ် သာ ရှိ လို့သူ ခိုင် ချို မာ နဲ့စ ကား များ..ရန် ဖြစ် ရင် ရုံး ခန်း မှာ ည အိပ် ချင် အိပ် တတ် တယ်...။ သူ့မှာ ဆိုင် ၃ ဆိုင် ဖြစ် လာ ပေ မဲ့ခု ထိ သူ့ဖါ သာ အ လုပ် တွေ လုပ် တုံး..။ ဆိုင် တ ဆိုင် စီ မှာ မန် နေ ဂျာ တ ယောက် စီ ရှိ နေ ပေ မဲ့သူ ဘယ် တော့မှ ပစ် မ ထား..။ ဒါ ကြောင့်သူ့မှာ စီး ပွါး ထဲ အ မြဲ နစ် မြုပ် နေ ပြီး အ ပျော် ခ ရီး ထွက် တာ တွေ မ လုပ် နိုင် ခဲ့ဘူး..။ ခိုင် ချို မာ က တော့သား သ မီး တွေ နဲ့သူ့ညီ မ ( ယု ယု မာ ) တို့လင် မ ယား နဲ့ခ ရီး ထွက် တတ် ပါ တယ် .။ ဖေ ၀င်း မောင် သူ့ဆိုင် ရှေ့ရောက် တော့သူ့ရုံး ခန်း မှာ တာ ၀န် ခံ ခန့်ထား တဲ့တ ပည့်( မန် နေ ဂျာ ဘဲ ဆို ပါ စို့) မျိုး ၀င်း လမ်း မ ပေါ် ထိ ဆင်း လာ စောင့်ကြို နေ တယ် ..။ သူ ကား ပေါ် က ဆင်း တာ နဲ့မျိုး ၀င်း က သူ့ကား ကို တက် မောင်း ပြီး ( ကား ရပ် တဲ Parking့ဂို ထောင် ) ထဲ သွင်း ပေး ပါ တယ် .။ ( ဘာ ထူး သေး လဲ မျိုး ၀င်း...) ( မ ထူး ပါ ဘူး..ဆ ရာ...အင် တာ ဗျူး လုပ် ဖို့ဘဲ ရှိ ပါ တယ်...) ( ကောင်း ပြီ..မင်း ပြန် တက် လာ ရင် စား စ ရာ တ ခု ခု ၀ယ် လာ ခဲ့ကွာ...) ( ဟုတ် ကဲ့ဆ ရာ...) ဖေ ၀င်း မောင် ဆိုင် ဘေး က လှေ ခါး က နေ ထပ် ခိုး ပေါ် တက် ရင်း ဆိုင် ဖက် ကို တ ချက် လှဲ့ကြည့်တယ်..။ စော သေး လို့ဆိုင် မ ဖွင့်သေး..။ မန် နေ ဂျာ ကို စိုး ဦး နဲ့အ လုပ် သ မား ၂ ယောက် လောက် တော့ဆိုင် ထဲ ရောက် နေ ကြ တာ တွေ့တယ် .။ မျိုး ၀င်း အ မြဲ ရှင်း လင်း ထား လို့သန့်ရှင်း ပြီး လေ အေး စက် အ မြဲ ဖွင့်ထား လို့အေး နေ တဲ့သူ့ရုံး ခန်း ထဲ ရောက် တော့အ လုပ် စား ပွဲ မှာ ၀င် ထိုင် ရင်း စာ ၇ွက် စာ တမ်း တွေ နဲ့ဖိုင် တွဲ တွေ ကို စစ် ကြည့်တယ် .။ ကွန် ပြူ တာ က တော့မျိုး ၀င်း ဖွင့်ထား ပြီး တာ တွေ့ရ တယ်..။ မျိုး ၀င်း က ဘေး က လ ဘက် ရေ ဆိုင် က နေ သူ စား နေ ကျ ပေါက် စီ နဲ့လ ဘက် ရေ ၀ယ် လာ ပေး တယ်....။ ( မင်း ကော မ စား ဘူး လား..) ( ကျ နော် စား ပြီး ပြီ ဆ ရာ..) အင် တာ ဗျူး လာ မှာ လူ ဘယ် နှစ် ယောက် လောက် ရှိ လဲ..မျိုး ၀င်း..) ( လူ ၂၀ လောက် ရှိ တယ် ဆ ရာ...) ( ဒို့လို တာ ...၄ ယောက် နော်..) ( ဟုတ် ကဲ့ဆ ရာ..ဆိုင် ၀န် ထမ်း က ၂ ယောက်..နေ ပြည် တော် က ဆိုင် အ တွက်... စာ ရင်း ကိုင် က တ ယောက်... ဒီ ရုံး အ တွက် က စာ ရေး မ တ ယောက်..) ( စည်း ကမ်း နဲ့မ ကိုက် ညီ တဲ့သူ ဆို ရင် မင်း က ဘဲ အ ပြင် က နေ ပယ် လိုက် မျိုး ၀င်း... ငါ့ဆီ ကို မ သွင်း လိုက် နဲ့တော့ ...ကြား လား..အ ချိန် ကုန် တယ်....) ( ဟုတ် ကဲ့ဆ ရာ....) သူ စား သောက် နေ တုံး ဘဲ သူ့ဟမ်း ဖုန်း က မြည် လာ တယ်..။ ကော် လာ အိုင် ဒီ ကို ကြည့်တော့..နိုင် ငံ ခြား နံ ပါတ် ... ဖြစ် နေ တယ်....။ ( ဟ လို..ဖေ ၀င်း မောင် ပါ.....) ( ကို ကို.ပါ..... ညီ ညီ ...ကို ကို စင် ကာ ပူ ရောက် နေ တယ်...) ( ဟုတ် လား..ကို ကို ဘယ် လောက် ကြာ မ လဲ ...သွား လိုက် တာ တောင် ညီ ညီ မ သိ ဘူး...) ( အေး ကွာ ..ရန် ကုန် မှာ မ နေ ချင် တော့တာ နဲ့ထွက် လာ တာ..ဒီ က ရုံး မှာ ဘဲ နေ တော့မ လို့ ....) ( မ ဝေ ရော ကို ကို နဲ့အ တူ လား...) ( မ ဟုတ် ဘူး...ဒါ လဲ ပြော ပြ ချင် လို့ညီ ညီ့ဆီ အ ခု ခေါ် လိုက် တာ... ကို ကို ... သူ နဲ့ကွဲ မယ် ..ဒါ ကြောင့်ဒီ ထွက် လာ ပြီး ဒီ မှာ ဘဲ ရုံး ထိုင် မယ်...ဒီ က ကို ဒစ် ကီ ကို ရန် ကုန် မှာ ထိုင် ခိုင်း မယ် ကွ..) ( ဟင်...) ဖေ ၀င်း မောင် အံ့အား သင့် သွား သည်..။ သည် သ တင်း သူ လုံး ၀ မ သိ သေး...။ ဘာ တွေ ဖြစ် ကုန် လဲ...။ ( ကို ကို ဘယ် လို တွေ ဖြစ် ကုန် တာ လဲ...မ ဝေ နဲ့ဘာ ဖြစ် ကြ တာ လဲ ... ညီ ညီ လဲ ကို ကို နဲ့မ တွေ့တာ ကြာ ပြီ...ခိုင် ချို က လဲ ဘာ မှ မ ပြော ဘူး လေ...) ( နိုး..ခိုင် ချို မာ ..ဘယ် သိ အုံး မ လဲ.. အ သေး စိတ် တော့ကို ကို မ ပြော တော့ဘူး ကွာ... ကို ကို ခေါ် ရ တဲ့အ ကြောင်း က ကိုကို ထွက် သာ လာ တယ်..ဝေ ဝေ အ တွက် ဘာ မှ မ စီ စဉ် ပေး ခဲ့ဘူး...သူ လို တာ ညီ ညီ ဘဲ ကြည့်ပြီး လုပ် ပေး လိုက် ပါ..ငွေ က အ စ ပေါ့ ..ညီ ညီ ..အား ကိုး မယ်..ဟုတ် လား....) ( အိုး..အိုး..ကို ကို ...သေ သေ ခြာ ခြာ ပြော မှ ရ မယ် လေ... ဘယ် လောက် အ ထိ လုပ် ပေး ရ မှာ လဲ....) ( ညီ ညီ ..ကို ကို အား လုံး မင်း လက် ထဲ အပ် တယ် ကွာ..ဝေ ဝေ နဲ့ပြန် မ ပေါင်း ချင် တော့ဘူး..ပြန် မ တွေ့ချင် တော့ဘူး...ဒါ ဘဲ.... ကုန် ချင် သ လောက် ကုန် ပါ စေ...ပေး လိုက်....) ကျော် မင်း မောင် တ ဖက် က ဖုန်း ချ သွား တယ် ..။3ဖေ ၀င်း မောင် သူ့ဆီ ပြန် ခေါ် ချင် တယ်....။ ဒီ အ ချိန် မှာ မျိုး ၀င်း ၀င် လာ တယ် ..။ ( အင် တာ ဗျူး စ မ လား ဆ ရာ ...လူ တွေ ရောက် နေ ပြီ...) နောက် မှ ဘဲ ကို ကို့ဆီ ပြန် ခေါ် တော့မည် လို့ဆုံး ဖြတ် ပြီး အ လုပ် ဖက် အာ ရုံ စူး စိုက် လိုက် တယ် ..။ အင် တာ ဗျူး လုပ် တာ ပြီး တော့နေ မွန်း တည့်နေ ပြီ..။ မျိုး ၀င်း ကို ခေါ် ပြီး နီး ရာ ဆိုင် မှာ ထ မင်း ထွက် စား ကြ မယ် ဆို ပြီး ရုံး ခန်း က ဆင်း လာ ကြ တော့အောက် က ဆိုင် ထဲ က မန် နေ ဂျာ ကို စိုး ဦး သူ တို့ကို မြင် လို့ပြေး ထွက် လာ တယ် .။ ( ကို ညီ ..ထ မင်း ထွက် စား မ လို့လား...) ( ဟုတ် တယ်..ခင် ဗျား ကော စား ပြီး ပြီ လား.. ဘာ ထူး သေး လဲ....) (မ ထူး ပါ ဘူး..ကို ညီ .. တ ခု ဘဲ..ကို ညီ အ ချိန် ရ ရင် ည နေ ဖြစ် ဖြစ် ခ ဏ တွေ့လို့ရ မ လား...) ( ကြည့်တာ ပေါ့..ခု တော့မ သိ သေး ဘူး ..ဖုန်း ခေါ် ကြည့်လေ...ဆိုင် ဘယ် လို နေ လဲ..ရောင်း အား..) ( ကောင်း ပါ တယ် ကို ညီ ..အ သစ် ထုတ် တဲ့အ ကင် Grill က တော် တော် အ ရောင်း သွက် တယ်..) ( ကောင်း ပြီ လေ ..ဘိုက် ဆာ ပြီ ဗျာ ..သွား လိုက် အုံး မယ်..) ( ဟုတ် ကဲ့ကို ညီ ..) ကို စိုး ဦး က သူ့အ ကို ( ကျော် မင်း မောင် ) ရဲ့သူ ငယ် ချင်း..။ စိတ် ချ ရ တဲ့လူ ရင်း မို့သူ့ဆိုင် မှာ မန် နေ ဂျာ ခန့်ထား ကြည့်တော့ အ လုပ် လဲ ကြိုး စား ..သ စ္စာ လဲ ရှိ တာ မို့အား ကိုး ရ တဲ့လူ ရုံ ပါ ဘဲ..။ သူ့ကို ညီ ညီ ..သူ့အ ကို ကျော် မင်း မောင် ကို ကို ကို လို့မိ သား စု က ခေါ် ကြ သ လို ရင်း နှီး တဲ့အ တွင်း လူ တွေ က လဲ သူ့ကို ( ကို ညီ ..) လို့ခေါ် ကြ ပါ တယ် .။ မျိုး ၀င်း နဲ့သူ ပ လက် ဖေါင်း ပေါ် လဲေ၇ာက် ရော ကား အ ဖြူ ရောင် တ စီး သူ တို့ဘေး ထိုး ဆိုက် လာ တယ် .။ ( ကို ညီ ...) အင်း.. လာ မှ လာ ပါ့မ လား လို့ .....ကို ကို့မ ယား ...ဝေ ဝေ ပေါ် ဦး ...။ နေ ကာ မျက် မှန် အ နက် ကြီး နဲ့ ..။ ကား ထဲ က သူ့ကို လှမ်း ခေါ် တယ်.....။ ( မ ဝေ ...ဒို့ဆီ လာ တာ လား...) ( ဒါ ပေါ့ ...ကို ညီ နဲ့တွေ့ချင် လို့ ....ဘယ် သွား မ လို့လဲ ..) ( ထ မင်း ထွက် စား တာ....) ( ဒါ ဖြင့်လာ လေ..ကား ပေါ် တက် ..ဝေ နဲ့လိုက် ခဲ့ ..တ နေ ရာ သွား စား ရင်း ...စ ကား ပြော ချင် တယ်....) ဖေ ၀င်း မောင် မျိုး ၀င်း ကို သူ့ဖါ သာ သွား စား ခိုင်း လိုက် ပြီး ကား ပေါ် တက် လိုက် ပါ တယ် .။ မ ဝေ ကား ကို ခပ် ပြင်း ပြင်း မောင်း ထွက် လိုက် တယ်....။ ( ကြား ပြီး ပြီ လား....) ( အင်း..ဘယ် လို ဖြစ် ကြ တာ လဲ...မ ဝေ...ကို ကို ခု န ဘဲ ဖုန်း ခေါ် တယ်....စင် ကာ ပူ က...) ( သူ ချာ တိတ် မ တ ယောက် နဲ့ညိ တယ် လေ..ကို ညီ က တော့အ လုပ် တွေ များ နေ တာ နဲ့သိ ချင် မှ သိ မယ်...) ကို ကို က ညိ တာ တွေ များ တော့ဖေ ၀င်း မောင် လဲ နောက် ပိုင်း သိပ် ဂ ရု မ ထား တော့ ..။ သူ့ကြက် ကြော် ဆိုင် တွေ က လဲ အောင် မြင် နေ တော့ သူ့အ လုပ် နဲ့သူ ရှုပ် နေ ခဲ့တာ ဘဲ..။ ဝေ ဝေ ပေါ် ဦး နဲ့ကို ကို ညိ တာ က အ ပြာ ဇာတ် လမ်း ဆန် တယ်..။ ဘယ် တော့မှ ဘတ်စ် ကား မ စီး ခဲ့တဲ့ကျော် မင်း မောင် ဟာ ဗိုလ် ချုပ် ဈေး နား က မှတ် တိုင် တ ခု မှာ ဝေ ဝေ ပေါ် ဦး ဘတ်စ် ကား စောင့်နေ တာ တွေ့တော့သိ သိ သာ သာ အ နောက် ကို ကား ထွက် နေ တဲ့ဝေ ဝေ ပေါ် ဦး ရဲ့တင် သား စိုင် တွေ ကို သူ ကြိုက် သွား တယ် ....ခိုက် သွား တယ်..။ မ ဝေ ၇ုပ် က လဲ ခပ် မိုက် မိုက် လေ..။ မျက် လုံး ၀ိုင်း ကြီး တွေ နဲ့ ..နှုတ် ခမ်း က လဲ ထူ ထူ ပြဲ ပြဲ..။ ပင် မ လာ အန် ဒ ဆင် လို ဆက် ဆီ ပုံ မျိုး...။ ရင် ထွား ထွား.. ခါး သေး သေး ..တင် ကား ကား..။ မ ဝေ တင် တွေ ကို မြင် ရင် လီး မတ် မတ် တောင် ကြ တာ ဘဲ .....လို့..ကို ကို မူး မူး နဲ့သူ့ကို ပြော ဘူး တယ် ...။ ကျော် မင်း မောင် ..မ ဝေ ဘတ်စ် ကား ပေါ် တက် တော့သူ နောက် က လိုက် တက် တယ်... ဘတ်စ် ကား က ကျပ် လွန်း နေ တယ်..။ ကျော် မင်း မောင် က ဝေ ဝေ ပေါ် ဦး အ နောက် မှာ နေ ရာ ယူ လိုက် တယ်..။ လူ တွေ ကျပ် နေ တဲ့ကြား စ ကား စ ပြီး ရော တယ်..။ ( ဟေး ..ယူ ဒ ဂုံ ( ၁) က မ ဟုတ် လား ...ယူ့ကို တွေ့ဘူး တယ် ......ယူ နံ မည် ...နီ လာ မ ဟုတ် လား ...) ( ဟင့်အင်း ...ဒို့နီ လာ မ ဟုတ် ဘူး ....ယူ လူ မှား နေ ပြီ ... ) သူ့ဖွား ဖက် တော် ကြီး က မ ဝေ ရဲ့တင် အိ အိ ကြီး ၂ လုံး ကြား မြုပ် ၀င် နေ ခဲ့ တယ် လေ..။ ရန် ကုန် မှာ ကောင် မ လေး တွေ ပြော လေ့ရှိ တဲ့( ထောက် လှမ်း ရေး ) ဆို တာ ပေါ့...။ ဘတ်စ် ကား က ဘ ရိတ် အုပ် ကြမ်း တော့ကျော် မင်း မောင် ရဲ့ဒုတ် မာ မာ ကြီး က ဖိ ဖိ ဆောင့်မိ တော့တာ ပေါ့ ..။ ကြည့်ရ တာ ဆာ လောင် နေ တဲ့အ ချင်း ချင်း ဆုံ ကြ တာ ဘဲ..။ ဝေ ဝေ ပေါ် ဦး က လက် နောက် ပြန် နဲ့ဒုတ် ကို စမ်း တယ်..။ ကျော် မင်း မောင် က သူ မ လဲ ဆာ လောင် နေ တာ ကို သိ တော့တ နေ ရာ မှာ တွေ့ကြ ဖို့နား နား ကပ် ပြော တယ် ..။ ဖေ ၀င်း မောင် က အဲ ဒီ နေ့က သူ တို့ကို အ ဖွါး က ၀ယ် ပေး ထား တဲ့ဗိုလ် အောင် ကျော် လမ်း က တိုက် ခန်း မှာ ရှိ နေ တယ်..။ ဖုန်း မြည် လို့ကိုင် လိုက် တော့ကို ကို ဖြစ် နေ တယ်..။4ကို ကို က သူ ဆော် တ ပွေ နဲ့ညိ နေ တယ်...အ ခန်း ကို ခေါ် ခဲ့ချင် တယ် တဲ့ ...။ ဖေ ၀င်း မောင် ဘာ ပြော နိုင် မှာ လဲ ...။ ခေါ် ချင် ခေါ် လာ ပေါ့....။ မ ဝေ ကို ခေါ် လာ ပြီး အ တွင်း ခန်း ထဲေ၇ာက် တာ နဲ့တ အား ဆော် ကြ တော့တာ ဘဲ..။ အ စ ရှိ တော့အ မြဲ ကို ခေါ် လာ တော့တာ ဘဲ..။ ဖေ ၀င်း မောင် လဲ သူ တို့အ ခန်း ထဲ တ ဏှာ လွန် ကြ တာ တွေ အ သံ ဗ လံ တွေ ကြား ရ ရုံ မ က တ နေ့မ ဝေ က ဖင် ကြီး ထောင် ပေး နေ တာ ကို ကျော် မင်း မောင် က အ နောက် က နေ တ အား ဆောင့်လိုး ပေး နေ တာ ကို မြင် မိ ခဲ့ဘူး တယ်..။ တ နေ့ လဲ သူ တို့တ ၀ လုပ် ကြ ပြီး အ ခန်း ထဲ က အ ပြင် ပြန် ထွက် လာ တော့..ကို ကို့လက် ထဲ သုတ် တွေ ပြည့်နေ လို့တွဲ လောင်း ကြီး ဖြစ် နေ တဲ့သုံး ပြီး သား ကွန် ဒမ် ကြီး ကိုင် ထား တယ် ..။ မ ဝေ က ကို ကို့ရှပ် ကို တ ထပ် ထဲ ၀တ် ထား တယ် ...။ မ ဝေ မှာ ထ မိန် ရော ပင် တီ ရော မ ပါ ဘူး ..။ ရှပ် အ င်္ကျီက ရှည် တော့ပေါင် လည် လောက် ထိ မြင် နေ ရ တယ် ..။ မ ဝေ က ဖေ ၀င်း မောင် ကို ( ယူ့အ ကို က သုတ် တော် တော် ထွက် တဲ့လူ ....ဒါ သာ ဒို့အ ထဲ ၀င် သွား ရင် က လေး ရ သွား မှာ ၁၀၀ % ဘဲ ...) လို့ပြော တယ် ..။ သူ တို့၂ ယောက် က မ လွယ် ဘူး ....။ အဲ ဒီ တုံး က မ ဝေ ကို သူ စိတ် နဲ့ပြစ် မှား ပြီး ထန် ခဲ့ဘူး ပါ တယ်...။ ကို ကို က ဘတ်စ် ကား ပေါ် သူ မ ဝေ ကို ထောက် လှမ်း ရေး လုပ် တာ က အ စ ( ဒီ တေးလ် ) သူ့ကို အား လုံးပြော ပြ ခဲ့တယ် လေ...။ ကို ကို က သိပ် အ လေး အ နက် စဉ်း စား တဲ့လူ မ ဟုတ် ဘူး ..။ မိန်း မ ကို အ ပျို စစ် တာ မ စစ် တာ လဲ ဂ ရု စိုက် တဲ့ပုံ မ ပေါ် ဘူး..။ မ ဝေ ကို သူ လက် ထပ် တာ ဖြစ် က တတ် ဆန်း ဘဲ..။ မိ သား စု က မ ကြည် လဲ သူ က ဂ ရု မ စိုက် ဘူး လေ...။ သူ တို့ယူ ပြီး ကျ တော့လဲ မ ဝေ က အ နေ အ ထိုင် ပက် စက် တာ ကြောင့်သူ တို့မိ သား ၂ စု အ တူ င ပ လီ ကို သွား ကြ တုံး က လဲ မ ဝေ ကိုယ် တုံး လုံး ကြီး ရေ ချိုး နေ တာ သူ တွေ့ဘူး ခဲ့ရ ပါ တယ်..။ ( ဒီ တ ခါ တော့အဲ ဒီ ချာ တိတ် မ ကို သူ ( စီး ရီး ရက်စ်) ဖြစ် သွား တယ် ကို ညီ...သူ ယူ မယ် တဲ့ ..မ ဝေ ကို ကွာ ပေး ပါ တဲ့ ....) မ ဝေ စ ကား သံ ကြောင့်ငယ် စဉ် က ဟာ တွေ ကို မြင် ယောင် နေ တဲ့အ တွေး စ တွေ ရပ် တန့်သွား ရ တယ်..။ ( စင် ကာ ပူ က နေ သူ ကွာ စာ ပို့လိုက် မယ်...လက် မှတ် ထိုး ပြီး ပြန် ပို့ပေး ပါ တဲ့ ...မ ဝေ လဲ သူ့ကို ပြော လိုက် တယ်..စာ ရွက် စာ တမ်း က အ ရေး မ ကြီး ပါ ဘူး လို့ ....) ( ကို ကို က မ ဝေ လို တာ လုပ် ပေး ဖို့ပြော တယ်...မ ဝေ ဖြစ် ချင် တာ တွေ လုပ် ပေး ဖို့ပြော တယ်...) ( ညီ ညီ ဘာ စား မ လဲ ...ကြေး အိုး စား လား..စား မ လား....) ( စား တယ် ..စား မယ်....) မ ဝေ က နံ မည် ကြီး နေ တဲ့ကြေး အိုး ဆိုင် တ ခု မှာ ရပ် လိုက် တယ်...။ ( ဒီ ဆိုင် စား မ လား...) ( မ ဝေ သ ဘော....) ဆိုင် ထဲေ၇ာက် တော့ခပ် ဟော့ဟော့ပုံ စံ နဲ့မ ဝေ နဲ့တွဲ လာ လို့လူ တွေ သူ တို့ကို တော် တော် ဘဲ ကြည့်ကြ တာ သ တိ ပြု မိ တယ်...။ မ ဝေ က ခု ထိ ကိုယ် လုံး က လန်း သေး တယ်...။ တင် တွေ က လမ်း လျောက် ရင် ဆတ် ဆတ် ခါ နေ တယ်...။ ကြေး အိုး မှာ ထား တုံး မ ဝေ က ( ညီ ညီ....ခိုင် ချို က ယူ နဲ့လုံး ၀ မ အိပ် တော့ဘူး ဆို .....) လို့ရုတ် တ ရက် မေး လိုက် တော့ဖေ ၀င်း မောင် ( ရှော့ က် ) ဘဲ..။ မ ဝေ ဘယ် က များ ကြား သွား ပါ လိမ့် ...။ ( မ ဝေ ဘယ် လို သိ တာ လဲ.....) ( ရှက် မ နေ ပါ နဲ့..ဒို့တ တွေ က အ ချင်း ချင်း တွေ ဘဲ....ညီ ညီ...) ( အင်း..ခိုင် ချို လုပ် တာ နဲ့ ..ကျ နော် ဆက်စ် မ ရှိ တာ ဟိုး လေး တ ကျော် ဖြစ် နေ ပြီ ထင် တယ် မ ဝေ...) ( ယူ တ ယောက် ထဲ မ ဟုတ် ဘူး ..ဒို့ရော ဘဲ...ယူ့အ ကို က ဒို့နဲ့မ အိပ် တာ ကြာ ပြီ...ယူ့သား လေး မွေး နေ့တုံး က မှတ် မိ လား...) မ ဝေ က မ ချို မ ချဉ် မျက် နှာ နဲ့မေး လိုက် တယ်..။ ဖေ ၀င်း မောင် မျက် နှာ မ ထား တတ် ..။ သူ့ဖါ သာ ပြန် မ မြင် ရ ပေ မဲ့သူ့မျက် နှာ နီ ရဲ နေ လိမ့်မယ် လို့သူ ထင် တယ်...။ သား ရဲ့မွေး နေ့ည..။ သူ မေ့ ပစ် လိုက် ထား တာ..။ မ ဝေ က ပြန် အ စ ဖေါ် လာ ပြန် တယ်..။ အဲ ဒီ ည က သား...သမီး တို့က သူ ငယ် ချင်း တွေ နဲ့ရော့ က် သီ ချင်း တွေ အ ကျယ် ကြီး ဖွင့်ပြီး မှောင် ချ ပြီး က ခုန် ကြ တယ်..။ ခိုင် ချို နဲ့သူ့ကျောင်း နေ ဘက် သူ ငယ် ချင်း တ ချို့ လဲ ထ မင်း စား ခန်း...ခြံ ၀င်း ထဲ က ရေ ကန် န ဘေး တို့မှာ ထိုင် စား သောက် စ ကား ပြော နေ ကြ တယ်..။ ဖေ ၀င်း မောင် က မှောင် နေ တဲ့မီး ဖို ခန်း ထဲ က ကောင် တာ မှာ ရှိ နေ တဲ့ဘဲ ကင် ကို နဲ နဲ ယူ စား ချင် တာ နဲ့ပု ၈ံ ပြား ထဲ ခက် ရင်း နဲ့ထည့်နေ တုံး...လူ လုံး မ သဲ ကွဲ တဲ့အ မှောင် ထဲ မှာ သူ့ဖွား ဖက် တော် ကို တ စုံ တ ယောက် က လာ စမ်း ပါ တယ်..။ ပ ထ မ စမ်း တာ..လုံ ချည် ပေါ် က နေ စမ်း တယ်..။ ပြီး တော့ဖွ ဖွ လေး ထိပ် ခေါင်း ကို ချေ နယ် တယ်..။ ဖွား ဖက် တော် က ဒိုင်း က နဲ ထ လာ တာ ပေါ့ ..။ သေ သေ ချာ ချာ အ မှောင် ထဲ စိုက် ကြည့်လိုက် တော့ ..အာ ပါး ပါး...မ ဝေ ဖြစ် နေ တယ်...။5တ ယောက် ယောက် တွေ့သွား ရင် အ ကြီး အ ကျယ် ဒု က္ခ ဘဲ ဆို ပြီး သူ ရှောင် ထွက် ဖို့လုပ် တော့မ ရ ဘူး.. မ ဝေ က အ တင်း ဆုတ် ကိုင် ပြီး ကွင်း တိုက် သ လို ရှေ့တိုး နောက် ဆုတ် က စား ပေး နေ ပါ တယ်..။ ခက် ကုန် တော့မယ် ဆို ပြီး...သူ ရုန်း ဖယ် ပြီး ခိုင် ချို တို့ရှိ နေ တဲ့ဖက် ကို လစ် ခဲ့လိုက် တယ်..။ ခ ဏ ကြာ တော့မ ဝေ အဲ ဒီ ဖက် ကို လိုက် လာ တယ်..။ လက် ထဲ မှာ လဲ ဘီ ယာ ပု လင်း လေး နဲ့ ..။ ( ဒို့သိပ် ဆာ နေ တယ်...I'm so hungry....I'm so hungry!!!!) နဲ့ရွတ် နေ လို့ခိုင် ချို က ( မ ဝေ..အ စား တွေ မျိုး စုံ ဘဲ လေ..ဆာ ရင် စား..ခိုင် ချို ထည့်ပေး ရ မ လား...) လို့တောင် မေး သေး တယ်..။ ဖေ ၀င်း မောင် ဒီ အ ကြောင်း သူ့ခေါင်း ထဲ က လုံး ၀ ထုတ် ပစ် ထား တာ..။ ကို ကို့မိန်း မ မို့သူ ဝေး ဝေး ကေ၇ှာင် တာ ..။ တ ကယ် တော့သူ လဲ မိန်း မ ကြိုက် တဲ့လူ ပါ...။ ( ဒု တ န သော ) မို့ရှောင် တာ မ ဟုတ်..။ အ ကို အ ရင်း ရဲ့မိန်း မ ဖြစ် နေ လို့လုံး ၀ မ ဖြစ် သင့်လို့ပါ..။ အဲ ဒီ က ထဲ က မ ဝေ ဆာ လောင် နေ တယ် ဆို တာ သူ ရိပ် မိ ခဲ့တယ်...။ ( ဟင်း..ဟင်း...ညီ ညီ က ရှက် နေ လိုက် တာ..မ ဝေ ကို ရှက် စ ရာ မ လို ပါ ဘူး..တ ကယ် ဆို ခိုင် ချို မ ပေး လို့လို တာ မ ရ ဖြစ် နေ တယ် ဆို ရင် မ ဝေ ကို ပြော ပြ ဖို့ကောင်း တာ ပေါ့ကွယ်..ကူ ညီ နိုင် တာ တွေ ကူ ညီ လို့ရ တာ ပေါ့ ..ဟုတ် ဘူး လား......) ညု တု တု ပြော လိုက် တဲ့မ ဝေ ရဲ့အိုက် တင် က ရှေး ဟောင်း မြန် မာ ရုပ် ရှင် ထဲ က အေး အေး သင်း ပုံ စံ မျိုး ပါ လား လို့ဖေ ၀င်း မောင် စိတ် ထဲ က စဉ်း စား နေ တယ်..။ ( ဒီ ဟာ တွေ က လူ တွေ သိ လို့မ ကောင်း ပါ ဘူး...မ ဝေ...ဒို့ လဲ အ ကြောင်း မျိုး စုံ ..ထောက် ထား ပြီး ဒီ လို ဘဲ နေ နေ တာ..ကိုယ့်ဘ ၀ နဲ့ကိုယ် ပေါ့ ....) ကြေး အိုး ပြုတ် တွေေ၇ာက် လာ လို့စား ဖို့လုပ် ကြ တာ နဲ့စ ကား ခ ဏ ရပ် တန့်သွား ပါ တယ်...။ ( ခိုင် ချို ..နဲ့လဲ မ တွေ့တာ ကြာ ပြီ.....သူ့ဆိုင် ကောေ၇ာင်း ကောင်း လား.... ) ( ဒီ လို ပါ ဘဲ....ကောင်း ပါ တယ်..ဒါ နဲ့မ ဝေ ငွေ လို လား..ဒို့ကို လို တာ ပြော နော်.. ကို ကို နဲ့ပတ် သက် ပြီး လဲ ဘာ တွေ ဖြစ် ချင် တယ် ဆို တာ ပြော ပြ ရင် ဒို့လုပ် ပေး မယ်... .) ( ဟင်း....ညီ ညီ နော် လာ ပြန် ပြီ ...လို တာ ပြော ဆို တာ..စော စော က ပြော ပြီး ပြီ လေ..မ ဝေ ဘာ လို နေ လဲ ဆို တာ ..ယူ က မ ဝေ လို တာ ပေး မှာ လား...) ( ခက် တော့တာ ဘဲ မ ဝေ ....ဒို့ဘယ် လို ပြော ရ မ လဲ...) ( လတ် တ လော တော့ဘာ မှ မ လို ဘူး .ညီ ညီ.. လို တဲ့အ ခါ ပြော မယ်...ဟုတ် လား.....) ပြော လေ ကဲ လေ..မန်း လေ ပြဲ လေ ဆို တာ မ ဝေ ပါ ဘဲ...။ ( ယူ့သား မွေး နေ့ည က ယူ က လစ် ပြေး တယ်.. တ ကယ် ဆို မ ဝေ အ ခက် အ ခဲ ကို ယူ ဖြေ ရှင်း ပေး ရင် ဘယ် လောက် ကောင်း မ လဲ..) ( မ ဝေ ..ဒို့တောင်း ပန် တယ်..ဒါ တွေ ပြန် မ ပြော ပါ နဲ့တော့ ...) ( ကောင်း ပြီ လေ..ယူ မ ကြား ချင် ရင် လဲ မ ပြော တော့ပါ ဘူး....မ ဝေ ဆီ လဲ ၀င် ခဲ့အုံး ..ပြ စ ရာ တွေ ရှိ တယ်...) ( ကောင်း ပြီ..ကဲ သွား စို့ ..) မ ဝေ နဲ့သူ ဆိုင် ထဲ က ထွက် တော့လဲ မ ဝေ ၀တ် တာ သိပ် ဟော့ တ် နေ လို့လား မ သိ ဘူး..။ လူ တွေ ၀ိုင်း ကြည့်တယ် လို့သိ နေ တယ်.... မ ဝေ အ င်္ကျီက လည် ပင်း သိပ် ဟိုက် နေ တော့ရင် သား အ ပေါ် ပိုင်း တွေ က ဘ ရာ စီ ယာ ထဲ က လျံ ထွက် နေ တယ်..။ လမ်း လျောက် တော့လဲ တင် ကား ကား တွေ ကတ ဒုံး ဒုံး နဲ့ခုန် နေ တယ် လေ..။ ကို ကို က လိုင်း ပြောင်း သွား တာ များ လား...။ အ ရင် က သူ ခိုင် ချို မာ ကို စ ကြိုက် တုံး က ကို ကို က သူ့ကို ( ညီ ညီ..မင်း ကြိုက် တဲ့ဆော် က ပ စ္စည်း မ ကောင်း ဘူး ထင် တာ ဘဲ...ပိန် ပိန် သွယ် သွယ် နဲ့...ကို ကို က တော့ဆော် ကို တောင့်တောင့်အယ် အယ် မှ ကြိုက် တာ ..) လို့ပြော ခဲ့ဘူး တယ်..။ ခု သူ ထပ် တွေ့တဲ့ချာ တိတ် မ ဆို တာ က တ ဖြောင့်ထဲ ဖြစ် နေ တဲ့မော် ဒယ် ဖြစ် နေ လို့လေ...။ အင်း....စိတ် ဆို တာ ..အ ကြိုက် ဆို တာ လဲ ပြောင်း လဲ တတ် တဲ့သ ဘော ရှိ တာ ဘဲ လေ.....လို့သူ တွေး နေ တယ်..။ ( ဟိတ် ...တိတ် လှ ချည် လား..ညီ ညီ..ဘာ တွေ တွေး နေ လဲ ...မ ဝေ လဲ ညီ ညီ့ကို လက် ဆောင် ကောင်း ကောင်း တ ခု ပေး ချင် တာ ရှိ နေ တယ်...ညီ ညီ ကြိုက် တာ ဖြစ် မှာ ပါ...) ဖေ ၀င်း မောင် လဲ သူ မ ဝေ နဲ့လူ ချင်း မ ခွဲ ခင် သူ့စိတ် ထဲ သိ ချင် နေ တာ လေး ကို မ အောင့်နိုင် တော့ဘဲ မ ဝေ ကို မေး မိ တယ်..။ ( မ ဝေ ..ဒို့နဲ့ခိုင် ချို ..အဲ....ခိုင် ချို က ဒို့နဲ့မ အိပ် တော့ဘူး ဆို တာ..မ ဝေ ကို ဘယ် သူ ပြော လဲ ဟင်...) မ ဝေ က တ ဟင်း ဟင်း နဲ့ရီ တယ် ..။ ( ဘာ လဲ..ယူ့အ ကြောင်းလျောက် ပြော ရ မ လား ဆို ပြီး ရန် တွေ့မ လို့လား.....) ( မ ဟုတ် ပါ ဘူး.. ဘာ မှ လဲ မ ရှည် တော့ပါ ဘူး...ဒီ အ ကြောင်း ကို ..သိ တယ် မ ဟုတ် လား ..ဒို့က အ လုပ် သိပ် များ တဲ့လူ....) ( မ ဝေ ကို ခိုင် ချို့ညီ မ ယု ယု ပြော ပြ တာ ....ယု ယု က ဘယ် က သိ တာ လဲ ကော သိ ချင် သေး လား ...ယု ယု က ခိုင် ချို့ဆီ က သိ တာ....) ဖေ ၀င်း မောင် ၂ ခု လုံး ကို အံ့သြ သွား တယ်...။ ယု ယု ကို ခိုင် ချို က သူ တို့လိင် မ ဆက် ဆံ ကြ တော့တာ ပြော ပြ တယ်..တဲ့ ..။ ယု ယု က လဲ ဘာ ကြောင့်မ ဝေ ကို ဒီ အ ကြောင်း ပြော သ လဲ...။ အင်း...သူ ဆာ နေ တာ ...ရိုင်း ရိုင်း ပြော ရ ရင်..မိန်း မ မ လိုး ရ လို့လိုး ချင် နေ တာ လူ တော် တော် များ များ သိ နေ ကြ ပြီ...။ မ ဝေ က သူ့ကို သူ့ဆိုင် ရှေ့ချ ပေး သွား တယ်..။ ( သွား ပြီ ညီ ညီ....ဖုန်း ခေါ် မယ်.....)6မ လွယ် ဘူး..ဝေ ဝေ ပေါ် ဦး ...။ သူ့ရုံး ခန်း ပေါ် ပြန်ေ၇ာက် တော့မျိုး ၀င်း က သူ မ ရှိ တုံး ဖုန်း ခေါ် ထား တဲ့လူ တွေ စာ ရင်း နဲ့ဘာ အ တွက် ခေါ် လဲ ဆို တာ အ ကြမ်း ဖျင်း ရေး မှတ် ထား တဲ့စာ ရွက် လာ ပေး တယ်..။ သူ ယူ ကြည့်ပြီး သူ အ ရေး ကြီး တယ် ထင် တဲ့ဖုန်း နံ ပါတ် တွေ ကို ပြန် ခေါ် ဖို့ဘော်လ် ပင် နဲ့စက် ၀ိုင်း ၀ိုင်း နေ တယ်..။ ရုံး ခန်း အ ပြင် က မျိုး ၀င်း ထိုင် တဲ့ဧည့်ခန်း က လူ လာ ရင် မြည် တဲ့..( တင်း တောင် ) ဆို တဲ့( chime sound ) အ သံ ကြား လိုက် ရ တယ်..။ ဧည့်သည် လာ ပြန် ပြီ..။ မျိုး ၀င်း က အင် တာ ကွမ်း က နေ . ဘယ် သူ လာ တယ် ဆို တာ ထုံး စံ အ တိုင်း ပြော တယ်..။ ( ဆ ရာ.. စင် သီ ယာ ပါ...) စင် သီ ယာ က လှည်း တန်း က သူ့ဆိုင် ခွဲ က မန် နေ ဂျာ ..။ ( အေး..အေး..ခေါ် လိုက် ..မျိုး ၀င်း ..) စင် သီ ယာ ၀င် လာ တယ်..။ ( ထိုင်..စင် သီ ယာ...) စင် သီ ယာ သူ့ရှေ့က ထိုင် ခုံ မှာ ၀င် ထိုင် တယ်..။ ( ဒီ နေ့စင် သီ ယာ့အော့ ဖ် နေ့လား ..အ ကြောင်း ကြီး ရှိ လား ...ဘာ ပြော ချင် လဲ...ဘာ လို လဲ ...) သူ့မှာ ဖုန်း ခေါ် စ ရာ တွေ များ နေ တဲ့အ ထဲ ..စင် သီ ယာ ဆို လို့သူ လက် ခံ တွေ့ဆုံ တာ ပါ..။ ( ဆ ရာ .. ဆ ရာ အ လုပ် သိပ် များ တယ် ဆို တာ စင် သီ ယာ သိ တယ် .. တို တို ဘဲ ပြော ပါ မယ်..စင် သီ ယာ အ ရမ်း အ ခက် အ ခဲ ဖြစ် နေ လို့..ဘယ် က မှ လဲ ကြိုး စား ကြည့်လို့မ ရ လို့ပါ...အဲ ဒါ.....) ( သိ ပြီ..စင် သီ ယာ... ငွေ လို နေ တယ် ပေါ့ ..ဘယ် လောက် လို လဲ....) ( ဆယ့်ငါး သိန်း ပါ..စင် သီ ယာ့အ မေ ..ဆေး ရုံ တက် ရ တော့...ခွဲ စိတ် ဖို့ ....) ဖေ ၀င်း မောင် ဆက် မ ပြော ဖို့လက် ပြ ရပ် ခိုင်း လိုက် တယ်..။ စင် သီ ယာ က သူ့လူ တွေ ထဲ မှာ စိတ် ချ ရ ပြီး သ စ္စာ ရှိ လူ ယုံ မန် နေ ဂျာ တ ယောက် ပါ..။ သူ့လှည်း တန်း က ဆိုင် က မန် နေ ဂျာ ပါ..။ လှည်း တန်း က ဆိုင် က လူ အ မြဲ ပြည့်နေ အောင်ေ၇ာင်း ကောင်း တယ်...။ စင် သီ ယာ က အ လုပ် တော် တယ်..။ တ နေ့ဆိုင် တွေ အား လုံး ကို တာ ၀န် ယူ အုပ် ချုပ် ဖို့ဂျင် န ရယ် မန် နေ ဂျာ အ ဆင့်တောင် သူ တိုး ပေး ဖို့စိတ် ထဲ စဉ်း စား ထား တာ..။ စင် သီ ယာ့အ တွက် ဆို သူ မေး ခွန်း ဘာ မှ မေး စ ရာ မ လို ဘူး လေ..။ သူ့အံ ဆွဲ ကို ဖွင့်ပြီး ငွေ ထုတ် တွေ တော် တော် များ များ ထုတ် ပြီး စား ပွဲ ပေါ် တင် လိုက် တယ်..။ တ သိန်း ထုပ် တွေ ..။ ( စင် သီ ယာ...အ ခု ဘာ နဲ့လာ လဲ..အိမ် က လာ တာ လား....) ( တ က္က ဆီ နဲ့လာ တာ ဆ ရာ ..အိမ် က ဘဲ...) ( ဒီ မှာ ၁၅ သိန်း...စင် သီ ယာ ..အ မေ ကိ စ္စ ဂ ရု စိုက် ပြီး လုပ်..အ လုပ် မ တက် နဲ့..မျိုး ၀င်း ကို စင် သီ ယာ့နေ ရာ ၀င် ခိုင်း မယ်...အ မေ စိတ် ချ ရ တဲ့အ ချိန် အ ထိ ..ဟုတ် ပြီ နော်...) စင် သီ ယာ ငွေ ထုပ် တွေ ကို ကျွတ် ကျွတ် အိပ် ထဲ ထည့်နေ တယ်..။ သူ မ ပါး ပြင် မှာ မျက် ရေ စီး ကြောင်း တွေ နဲ့ ..။ ( ကျေး ဇူး ကြီး.....) ( စင် သီ ယာ .....မျိုး ၀င်း ကို လိုက် ပို့ခိုင်း မယ်....သွား တော့ ...အ မေ ကိ စ္စ လုပ် တော့ ..) အင် တာ ကွမ်း ကို နှိပ် တယ်..။ ( မျိုး ၀င်း.. ခ ဏ ) မျိုး ၀င်း ၀င် လာ တယ်..။ ( စင် သီ ယာ သွား ချင် တဲ့နေ ရာ မင်း လိုက် ပို့...အ ခု ဆိုင် မှာ ဘယ် သူ အင် ချပ် လဲ စင် သီ ယာ.... အောင် ကြီး လား..) ( ဟုတ် ကဲ့ဆ ရာ..) ( မျိုး ၀င်း.... မင်း စင် သီ ယာ ခွင့်သွား နေ တုံး လှည်း တန်း ဆိုင် ကို တာ ၀န် ယူ လုပ် ရ မယ်..ဖြစ် တယ် မ ဟုတ် လား...) မျိုး ၀င်း ပျော် သွားတယ်..ဆိုင် ကြီး တ ဆိုင် ကို အုပ် ချုပ် ဖို့တာ ၀န် ပေး အပ် တာ သူ့ကို ယုံ ကြည် စိတ် ချ လို့မ ဟုတ် ပါ လား..။ ( ဖြစ် ပါ တယ် ဆ ရာ.. ဒီရုံး အ တွက်....) ( အင်း...ငါ ဒီ နေ့မ နက်...အင် တာ ဗြူး လိုက် တဲ့က လေး မ..ဘယ် သူ ....ခင် မေ ကျင်.....သူ့ကို ငါ နောက် အ ပတ် မှ လာ ခိုင်း ထား တာ...အ ခု ဘဲ ငါ ပြန် ဖုန်း ဆက် လိုက် မယ်..) စင် သီ ယာ နဲ့မျိုး ၀င်း ထွက် သွား ကြ တော့သူ ဖိုင် တွဲ ထဲ ပြန် ကြည့်ပြီး မ နက် က အ လုပ် အင် တာ ဗြူး လိုက် ပြီး ခန့်ဖို့နောက် အ ပတ် ချိန်း ထား တဲ့( ခင် မေ ကျင် ) ပေး ထား တဲ့ဖုန်း နံ ပါတ် ကို ခေါ် လိုက် တယ်...။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ဖေ ၀င်း မောင် ည ရ နာ ရီ ကျော် မှာ အိမ် ပြန် တယ်..။ မျိုး ၀င်း က စင် သီ ယာ သွား လို တာ အား လုံး လိုက် ပို့ပေး အ ပြီး သူ့ကား ကို ဂို ဒေါင် ထဲ ပြန် လာ ရပ် ပေး သွား တယ်..။ မျိုး ၀င်း သူ ခိုင်း တဲ့အ တိုင်း လှည်း တန်း ဆိုင် ကို တာ ၀န် ယူ ဖို့သွား ပြီ..။7သူ အ လုပ် ခန့်တဲ့ကောင် မ လေး လဲ သူ ဖုန်း ဆက် ခေါ် ပြီး တ နာ ရီ လောက် ကြာ တော့ရောက် လာ တယ်..။ ဒီ ကောင် မ လေးေ၇ာက် မ လာ ခင် အောက် ထပ် က သူ့ဆိုင် ကို ဆင်း သွား ပြီး ဆိုင် က လူ တွေ ကြော် တာ ရောင်း တာ တွေ ကို ဆင်း ကြည့်ပြီး သူ ကိုယ် တိုင် လဲ စား တဲ့လူ တွေ ဘာ ပြော လဲ နား ထောင် ကြည့်တယ်...။ ကောင် မ လေး က မျက် နှာ ၀ိုင်း ၀ိုင်း..မျက် လုံး ၀ိုင်း ၀ိုင်း လေး နဲ့ချော ချော လေး ပါ ဘဲ...။ သူ့သ မီး ကြီး လောက် အ ရွယ် ပါ..။ ဥာဏ် ရေ ထက် မြက် မယ် လို့သူ ထင် လို့ခန့်တာ ပါ..။ ခင် မေ ကျင် တဲ့ ..။ ( ကဲ..ခင် မေ ကျင် ...လူ ချက် ချင်း လို တာ နဲ့ချက် ချင်း ခေါ် ရ တာ ဘဲ...လုပ် ရ မှာ က တော့မ နက် က အင် တာ ဗြူး မှာ ပြော ပြ ခဲ့သ လို ဘဲ....လာ သ မျှ ဖုံး ထူး ပြီး အင် ဖေါ် မေး ရှင်း လက် ခံ မှတ် ယူ...ကျ နော့်ကို တင် ပြ ...ဧည့်သည် လာ ရင် လဲ ဒီ လို ဘဲ .ပေါ့ ....Receptionist အ လုပ် ပေါ့ ...) ( ဟုတ် ကဲ့....) ခင် မေ ကျင် ကို ကြည့်ရ တာ အ ရိပ် ပြ ရင် အ ကောင် ထင် မဲ့မိန်း က လေး ဖြစ် မယ် လို့ယူ ဆ တာ ဘဲ..။ လူ ငှား တာ ..အင် တာ ဗြူး တာ များ လာ တော့လဲ အ မြဲ တမ်း လူ ငှား တာ ဖေ ၀င်း မောင် သူ ကိုယ် တိုင် ဘဲ လုပ် တော့လူ ကဲ ခတ် တာ ကျွမ်း ကျင် လာ သ လို ဘဲ..။ ဆိုင် ဖွင့်ကာ စ က သူ့လူ ရင်း လို့ထင် တဲ့မန် နေ ဂျာ တ ယောက် က သူ့ကို ကပ် လှီး နေ တာ ဖြစ် ခဲ့တယ် လေ..။ နောက် ကျော ကို ဒါး နဲ့ထိုး တာ ပေါ့ ..။ ဖေ ၀င်း မောင် အိမ် ကို ရောက် တော့ေ၇ ပူ ပူ တ ၀ ချိုး လိုက် တယ် ..။ ဒေါ် ခင် စီ က ( ကို ညီ ထ မင်း စား မ လား..) လာ မေး တယ်..။ ဒေါ် ခင် စီ က ဖေ ၀င်း မောင် ရဲ့မိ ဘ လက် ထက် ထဲ က တော က နေ လာ နေ ပြီး ထ မင်း ဟင်း ချက် ..အိမ် မှာ ၀ိုင်း လုပ် ၀ိုင်း စား နေ သူ ပါ..။ လ ခ စား အ လုပ် သ မား မ ဟုတ် ဘူး..။ ခု တော့ဒေါ် ခင် စီ လဲ အ သက် ကြီး လာ ပြီ ဆို တော့( မ သန်း ) ဆို တဲ့အိမ် ဖေါ် တ ယောက် ငှား ထား ပြီး ဒေါ် ခင် စီ ကို ကူ ညီ စေ တယ်..။ ( က လေး တွေ ကော စား ပြီး ကြ ပြီ လား...ဒေါ် စီ...) ( စား ပြီး ပြီ...သူ တို့က သိ တဲ့အ တိုင်း ဘဲ ..သိပ် အ စား မ မက် ကြ ဘူး...သား ကြီး က တော့သူ ကြိုက် တာ ချက် ပေး တာ မို့တော် တော် စား ပါ တယ်.. ) ထ မင်း စား ပွဲ မှာ သူ ထိုင် တော့အိမ် ဖေါ် ကောင် မ လေး ( မ သန်း ) က ထ မင်း ဟင်း ပု ဂံတွေ လာ ချ ပေး တယ်..။ ငါး ရံ့အူ ဟင်း နဲ့ချဉ် ပေါင် ဟင်း ..င ပိ ချက် တို့စ ရာ...။ သူ စား နေ ဆဲ ..ခိုင် ချို မာ ပြန် ရောက် လာ တယ်...။ မ သန်း ကို ၀ိုင် ပု လင်း ယူ လာ ခိုင်း ပြီး ဖေ ၀င်း မောင် အ နား လာ ထိုင် ပြီး သောက် တယ်..။ ခိုင် ချို မာ ၀ိုင် သောက် တတ် လာ တာ သိပ် မ ကြာ သေး..။ ခု နောက် ပိုင်း အ မျိုး သ မီး တွေ ၀ိုင် သောက် တာ တွေ့တာ များ လာ တယ် ..။ နိုင် ငံ ခြား နဲ့ ထိ တွေ့ တာ များ လာ ကြ ပြီး ခေတ် မှီ လာ ကြ တာ လား..။ ခိုင် ချို မာ ..နဲ့အ တူ သူ့ကို ကူ ညီ နေ တဲ့မိန်း က လေး ..( အိ အိ စိုး ) ပါ ထ မင်း စား ပွဲ မှာ လာ ထိုင် တယ်..။ အိ အိ စိုး က သူ ပါ စား မယ် ဆို လို့မ သန်း က ထ မင်း ပြင် ပေး တယ်..။ သူ့မိန်း မ လဲ သူ နဲ့က လိင် မ ဆက် ဆံ တော့တဲ့အ ချိန် ( အိ အိ စိုး ) နဲ့အ မြဲ တ တွဲ တွဲ တွေ့နေ ရ လို့တ ခါ ရန် ဖြစ် တုံး က ( ခိုင် ချို ...မင်း..လက်စ် ဘီ ယန် ဖြစ် နေ ပြီ လား... ) လို့သူ မေး လို့ခိုင် ချို မာ အ ရမ်း ဒေါ သ တွေ ပြ ခဲ့တယ် လေ..။ ( ခိုင် ချို ကော မ စား ဘူး လား ..) ( ဟင့်အင်း ..ည နေ က ယု ယု ဆိုင် ကို ၀င် လာ တယ် ..ယု ယု နဲ့နန်း ကြီး သုပ် စား ထား လို့မ ဆာ တော့ဘူး.. လူ က အ သက် ရ လာ တော့နဲ နဲ စား မိ ရင် ၀ိတ် က တက် တော့တာ ဘဲ...) ကို ကို့အ ကြောင်း ပြော မ လို့လုပ် ပြီး လူ တွေ အ များ ကြီး ရှေ့မ ပြော ချင် တာ နဲ့သူ တ ခြား စ ကား တွေ ပြော နေ တယ် ..။ နောက် တော့ခိုင် ချို သ တင်း ရ သွား ပြီး သူ ဘာ ကြောင့်မ ပြော လဲ အ ပြစ် တင် နေ မှာ စိုး လို့သူ ခိုင် ချို့ကို ကို ကို့အ ကြောင်း ပြော လိုက် တယ်..။ ( မ နက် က ကို ကို ဖုန်း ဆက် တယ်..စင် ကာ ပူ ရောက် နေ တယ်..) ( ဟင်..ဟုတ် လား...သိ တောင် မ သိ ဘူး ..ခါ တိုင်း ဆို သူ ဒို့အိမ် ကို သွား မဲ့ အ ကြောင်း အ မြဲ ပြော တာ..က လေး တွေ ဘာ မှာ အုံး မ လဲ မေး တယ်..) ( သူ မ ဝေ နဲ့ကွဲ ပြီ..ခိုင် ချို..... သူ စင် ကာ ပူ မှာ ဘဲ နေ တော့မယ်...ပြော တယ်...) ( ဟင် ... ) ခိုင် ချို ရော အ ခန်း ထဲ က လူ အား လုံး အံ့သြ သွား ကြ တယ်...။ ( ကို ညီ..ဘယ် လို ဖြစ် တာ လဲ..ကို ကို့ကို မေး မ ကြည့်ဘူး လား...) ခိုင် ချို က သူ့ကို ကို ကို လို့ခေါ် ခဲ့တာ လွန် ခဲ့တဲ့၂ နှစ် လောက် အ ထိ ပါ..။ သူ နဲ့အ ခန်း ခွဲ အိပ် ပြီး လိင် မ ဆက် ဆံ တော့တဲ့အ ချိန် လောက် က စ ပြီး အ ခေါ် အ ဝေါ် တွေ ပါ ပြောင်း ပြီး ( ကို ညီ ) ဖြစ် လာ တာ ..။ ( ကို ကို က ဘာ မှ ဒီ တေးလ် မ ပြော ဘူး..ပြော တာ က ( မ ဝေ )..) ဖေ ၀င်း မောင် က မ ဝေ ပြော ပြ တဲ့ကို ကို က မော် ဒယ်လ် ကောင် မ လေး တ ယောက် နဲ့ညိ တာ ခိုင် ချို ကို ပြော ပြ လိုက် တယ်..။ ခိုင် ချို မာ က မ ဝေ ဆီ ချက် ချင်း ဖုန်း ခေါ် တော့တာ ဘဲ ..။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ 8 ယု ယု မာ ယု ယု မာ ..မ မကြီး ဆီ က ကို ညီ နဲ့မ မ ကြီး တို့လင် မ ယား လို မ အိပ် ကြ တော့ဘူး ဆို တာ ကြား လိုက် ရ တော့မ မ ကြီး ကို ( ဘာ ကြောင့်လဲ..ဒီ လို မ လုပ် ပါ နဲ့ ..ယော င်္ကျား ဆို တာ ဆက်စ် လို ချင် ကြ တာ ဘဲ..ကို ညီ က ၄၅ နှစ် ဆို တာအ သက် ကြီး တယ် လို့မ ဆို နိုင် သေး ဘူး....) ဆို ပြီး ယု ယု မာ .. လင် နဲ့ပြန် ဆက် ဆံ ဖို့အ မ ဖြစ် သူ ကို တိုက် တွန်း ခဲ့ပါ တယ်..။ မ မ ကြီး က သူ ကို ညီ ဆာ နေ မယ် ဆို တာ သိ တယ် လို့လဲ ပြော တော့ယု ယု မာ က ( သူ မ နေ နိုင် တော့ဘဲ တ ခြား မိန်း မ နဲ့ဖေါက် ပြန် အောင် မ မ ကြီး က လုပ် နေ တာ လား..မ မ ကြီး က တွေ့ချင် တာ လား....) လို့တောင် မ မ ကြီး ကို အ ပြစ် တင် ခဲ့သေး တယ်..။ ဒီ အ ကြောင်း မ မ ကြီး က သူ့ကို ပြော ပြ လို့သူ တို့ညီ အ မ ..ဒီ အ ကြောင်း ဆွေး နွေး ခဲ့ကြ တာ တောင် ၁ နှစ် ကျော် သွား ပြီ..။ ယု ယု မာ က ခိုင် ချို မာ ထက် ၆ နှစ် ငယ် တယ်..။ ခိုင် ချို မာ နဲ့ကို ညီ ရီး စားဖြစ် ကြ တော့ယု ယု မာ က ကော လိပ် တောင် မ ရောက် သေး ဘူး..။ သူ တို့၂ ယောက် ယူ ကြ တော့ယု ယု မာ က သ တို့သ မီး အ ရံ လုပ် တယ် ..။ ကို ညီ က အ မ ယောင်္ကျား ဆို ပေ မဲ့အ ကို အ ရင်း တ ယောက် လို ဘဲ ယု ယု မာ အ ပေါ် အ စ စ ကောင်း ပါ တယ်..။ ခိုင် ချို မာ ဘာ ကြောင့်ကို ညီ နဲ့မ အိပ် တော့လဲ..ယု ယု မာ လဲ မေး ပေ မဲ့မ မ ကြီး က အ တိ အ ကျ အ ဖြေ မ ပေး ခဲ့ဘူး..။ ( ငါ ရှက် ပါ တယ် ဟယ်..သား တို့သ မီး တို့က လဲ ကြီး နေ ပြီ ....ငါ လဲ သူ့အ ပေါ် စိတ် မ ရှိ တော့ဘူး.....) တဲ့ ..။ ယု ယု မာ က မ မ ကြီး ဆ ရာ ၀န် နဲ့တိုင် ပင် ကြည့်ပါ လား လို့ေ ပြာ တော့လဲ ( ယု မာ... ကိုယ့်အ တွင်း ရေး သူ များ ကို လျောက် ပြော ရ မှာ လား...) တဲ့ ..။ ယု ယု မာ သူ့လင် ကို မျိုး စည် ခ ရီး ထွက် တဲ့အ ချိန် တွေ ဆို ရင် မ မ ကြီး တို့အိမ် မှာ သွား နေ တတ် တယ် ..။ နောက် ပိုင်း ကို ညီ နဲ့မ မ ကြီး အိပ် ခန်း တ ခု ထဲ တောင် အ တူ တူ မ အိပ် ကြ တော့ဘူး ဆို တာ တွေ့ရ တယ်...။ ကို မျိုး စည် နဲ့သူ နဲ့က ကော လိပ် တက် နေ တုံး တွေ့ကြ ချစ် သူ ဖြစ် ကြ တာ ပါ..။ ဘွဲ့ရ ပြီး တော့ကို မျိုး စည် က စစ် ထဲ ၀င် ပြီး စစ် ဗိုလ် ဖြစ် လာ တယ် ..။ သူ တို့လက် ထပ် ကြ တယ်..။ ကို မျိုး စည် က တိုက် ခိုက် ရ တဲ့ကြည်း တပ် က ဆို တော့ခ ဏ ခဏ ရှေ့တန်း ထွက် ရ တတ် တယ်..။ ဗိုလ် ကြီး အ ဆင့်မှာ တိုက် ပွဲ မှာ ထိ ခိုက် လာ တယ်..။ ကျည် ထိ ..မိုင်း ထိ တာ မျိုး မ ဟုတ် ဘူး..။ ရန် သူ ရှေ့ပြေး အ ဖွဲ့နဲ့ကို မျိုး စည် တို့တပ် စု နဲ့လ မိုက် ည မှာ မျက် နှာ ချင်း ဆိုင် .. ပက် ပင်း တိုး တာ..။ လက် တ ကမ်း တိုက် ပွဲ ဖြစ် ပြီး လှံ စွပ် ထိုး လုံး ထွေး သတ် ပုတ် ကြ တဲ့အ ထိ ဖြစ် ကြ ပြီး ကို မျိုး စည် တော် တော် မြင့်တဲ့တောင် ဂျောက် က ပြုတ် ကျ တယ်..။ အ ကျ မ တော် တော့အောက် က ကျောက် တုံး ပေါ် ခါး နဲ့ကျ တယ်..။ အင် အား ကြီး တဲ့ရန် သူ တွေ က အ လုံး အ ရင်း နဲ့လိုက် တိုက် တော့သူ့ကို သူ့ရဲ ဘော် တွေ က ထမ်း ပြီး ဆုတ် ခွါ လာ ခဲ့ကြ ရ တယ်..။ ရ ဟတ် ယာဉ် နဲ့ဆေး ရုံ ပို့ကြ တယ်..။ အဲ ဒီ ထဲ က ကို မျိုး စည် ဟာ ခါး နဲ့အောက် ပိုင်း မ သန် တော့ဘူး..။ စစ် တပ် က အ ငြိမ်း စား ယူ လိုက် ရ တယ်..။ အ ရပ် ဖက် မှာ အ ထူး အ ရာ ရှိ ဖြစ် လာ တယ်..။ ယု ယု မာ က တော့ဥ ပ ဒေ ဘွဲ့နဲ့ကျောင်း ပြီး တာ ဆို တော့မြို့နယ် တ ရား သူ ကြီး ဖြစ် လာ တယ်...။ မ မ ကြီး နဲ့ကို ညီ ကိ စ္စ ကို သူ ဘာ ကြောင့်ကိုယ် ချင်း စာ ပြီး ၀င် ပြော နေ သ လဲ ..။ ယု ယု မာ လဲ လင် ယောင်္ကျား ကို မျိုး စည် က သူ ဒဏ် ရာ ရ ပြီး က ထဲ က သူ နဲ့ လင် မ ယား လို မ အိပ် နိုင် တော့ပါ ဘူး..။ လုံး ၀ ကြီး ပန်း သေ တာ မျိုး မ ဟုတ် ပေ မဲ့ခါး က ကောင်း ကောင်း မ သန် တော့ဘူး လေ..။ အ တွင်း ကျ ကျ ပြော ပြ ရ မယ် ဆို ရင် ယု ယု မာ က အ ပေါ် က တက် ထိုင် ပြီး ဆက် ဆံ ဖို့ကြိုး စား ပေ မဲ့လဲ ကို မျိုး စည် ရဲ့လီး က ကြာ ရှည် အောင် မ တောင့်တင်း နိုင် ဘူး..။ ကို မျိုး စည် က လဲ နှစ် နဲ့ချီ လာ အောင် သူ့မ ယား မှာ လိင် ဆက် ဆံ မှု မ ရှိ ရ တော့သူ့မ ယား ယု ယု မာ ဆ န္ဒ ပြေ အောင် ဆို ပြီး ယု ယု မာ ကို စောက် ပတ် ယက် ပေး ပါ တယ်..။ ယု ယု မာ လဲ စောက် ပတ် အ ယက် ခံ ရ ပြီး စိတ် တွေ အ ရမ်း ထ ရွ ပြင်း တန် လာ ချိန် မှာ လီး ကို တောင့် တ အ လိုး ခံ ချင် လာ ပြီး ( လီး မ ရ..လီး မ ရှိ ) တာ ကြောင့်လင် ဖြစ် သူ ကို စောက် ပတ် မ ယက် ပေး စေ ချင် တော့ဘူး...။ ယု ယု မာ နဲ့ကို မျိုး စည် တို့ယူ ခါ စ က ဆို ရင် ( မ ချွတ် တမ်း လိုး ) ခဲ့ကြ တာ ပါ..။ တ ချီ လိုး ပြီး စောက် ပတ် ထဲ က လီး မ နုတ် ဘဲ နောက် တ ချီ ဆက် လိုး တာ လေ..။ ကို မျိုး စည် က သန် လဲ သန် တဲ့လူ ပါ..။ ယု ယု မာ ကို လိုး တိုင်း ( ပြီး ) အောင် လိုး ပေး ပြီး ယု ယု မာ ပြီး မှ သူ ပြီး တယ်..။ သုတ် မ လွှ တ် ဘဲ ထိန်း နိုင် တဲ့လူ ပါ..။ ကို မျိုး စည် လိုး တာ တွေ က သိပ် အား လဲ ပါ တယ်..။ လူ နံ ပိန် ကျွဲ ဂျို လိန် တဲ့ ..။ ကို မျိုး စည် က ပိန် က လောက် အ လိုး သန် တယ်..။ လိုး နိုင် တယ်..။ လီး က လဲ ရှည် တယ်..။9ယု ယု မာ ဟို တုံး က လင် နဲ့လိုး ခဲ့ကြ တာ တွေ ပြန် စဉ်း စား ရင် စိတ် တွေ ထ လာ ရ တယ်..။ ယု ယု မာ လဲ ကို ညီ လို ဘဲ ဆာ နေ တာ..။ မ ရ နိုင် ဘူး ဆို မှ ပို လို ချင် တဲ့လူ သား သ ဘာ ၀ ကြောင့်ဒီ စိတ် ဖြစ် ပေါ် ရင် ( ဘိုက် ဆာ ရင် စား ပြစ် လိုက် သ လို ...)ယောင်္ကျား တ ယောက် ရဲ့လိုး တာ ကို ခံ လိုက် ချင် တဲ့စိတ် တွေ တ ဖွါး ဖွါး ပေါ် ပေါက် ရ တာ ခ ဏ ခ ဏ ပါ ...။ ကာ မ အ ရ သာ ကို တောင့်တ တဲ့အ ခက် အ ခဲ နဲ့ရင် ဆိုင် နေ ရ တာ ကြောင့်ကို ညီ့ကို ကိုယ် ချင်း စာ မိ တာ ပါ..။ ယု ယု မာ က တော့ဒီ ကိ စ္စ ကို ဘယ် သူ့ကို မှ ဖွင့်ဟ မ ပြော ခဲ့သ လို လင် ဖြစ် တဲ့ကို မျိုး စည် ကို လဲ ဘယ် သူ့ကို မှ မ ပြော ဖို့ပိတ် ခဲ့ပါ တယ်..။ ယု ယု မာ ကို ညီ နဲ့အ မ ရဲ့ရီး စား တုံး က ရော...အ မ နဲ့လင် မ ယား ဖြစ် ပြီး ခဲ အို အ နေ နဲ့ရော နီး နီး ကပ် ကပ် နေ ခဲ့ရင်း နှီး ခဲ့တော့မြီး ကောင် ပေါက် ..ဆယ် ကျော် သက် အ ရွယ် ထဲ က ကို ညီ နဲ့ပတ် သက် ပြီး ယု ယု မာ စိတ် လှုပ် ရှား ခဲ့ရ တာ ရင် ခုန် ခဲ့ရ တာ တွေ ရှိ ခဲ့ပါ တယ်..။ ပွင့်လင်း ပြီး အ ပြော ပက် စက် တဲ့အ မ ကြီး ခိုင် ချို မာ ကြောင့်လဲ ခိုင် ချို မာ က အ မှတ် မ ထင် ပြော ဆို လိုက် တာ တွေ က ယု ယု မာ အ တွက် ည ဖက် အိပ် မ ရ ဘဲ ကာ မ ဆန္ဒ တွေ ပြင်း ပြ ပြီး သူ မ ဖါ သာ ဖြေ ဖျောက် ရ တာ တွေ ဖြစ် ခဲ့ရ ပါ တယ်..။ သူ တို့လင် မ ယား လိုး ကြ တဲ့အ ကြောင်း...လင် ဖြစ် သူ ကို ညီ ရဲ့လီး ဘယ် လို ရှည် တဲ့တုတ် တဲ့အ ကြောင်း ကို ညီ က သူ့စောက် ပတ် ကို ယက် ပေး ပြီး သူ က လဲ လီး အ မြဲ စုတ် ပေး တဲ့အ ကြောင်း..ညီ မ အ ပျို လေး ကို ပြော ခဲ့ တယ် လေ..။ ယု ယု မာ လဲ ဒါ တွေ မြင် ယောင် ပြီး စိတ် တွေ ထ ကြွ ခဲ့တာ အ ခါ ခါ ပါ ဘဲ...။ တ ရား ရုံး က သူ့ရုံး ခန်း ထဲ အ မှု တွဲ တွေ ထိုင် ဖတ် နေ တုံး ဖုန်း မြည် လာ တယ်..။ မ မ ကြီး ..ခိုင် ချို မာ ပါ...။ ( ယု မာ လား..မ ကြီး ပါ..ယု မာ စ ကားပြော လို့ရ လား...) ( ရ တယ် မ မ ကြီး ..ဘာ ထူး သေး လဲ..အား လုံး နေ ကောင်း ကြ လား....က လေး တွေေ၇ာ ..) ( အ ရေး ကြီး တာ အ ရင် ပြော မယ်...ယု မာ ...မ ကြီး အန် တီ မေ ဘယ်လ် တို့ဆီ ကို ၁ လ လောက် သွား မ လို့...) ( ဘယ် တော့လဲ မ မ ကြီး..ဘယ် သူ တွေ ပါ အုံး မ လဲ..ကို ညီ ကော မ ပါ ဘူး လား...က လေး တွေေ၇ာ ...) ( ယု မာ နင့်မေး ခွန်း တွေ က များ လိုက် တာ ဟာ .... ဘယ် သူ မှ မ ပါ ဘူး..ငါ တ ယောက် ထဲ သွား မှာ ...ငါ သွား တုံး ယု မာ ..နင် ငါ တို့အိမ် မှာ က လေး တွေ နဲ့နေ ပေး မ လား ...၁ လ လောက် ပါ ဘဲ... နောက် လ ဆန်း လောက် ပေါ့ .... ) ( နောက် လ ဆန်း ဆို အိမ် မှာ ကို မျိုး စည် တောင် မ ရှိ ဘူး ..ကို မျိုး စည် က သူ့ဘော့ စ် နဲ့တ ရုပ် ပြည် သွား မှာ လေ... အဲ ဒီ အ ချိန် မှာ.....) ( အေး..ဒါ ဆို ယု မာ ...အို ကေ တယ် နော် ....အ ဓိ က က က လေး တွေ ပါ ဘဲ ဟာ...သူ တို့ကို ငါ သွား နေ တုံး အ ရင် က လို ပေါ့နင် ဘဲ ငါ့ကိုယ် စား လုပ် ကိုင် ပေး စေ ချင် တာ ဘဲ...) ( စိတ် ချ ..အ မ ကြီး ...ယု မာ တူ နဲ့တူ မ ကို အား လုံး တာ ၀န် ယူ တယ်.. သွား သာ သွား ....ဆိုင် က ရော ဘယ် သူ ကြည့်ပေး မ လဲ....) ( အင်း..ဆိုင် က မ ကြီး ရဲ့အ ဆစ်စ် တင့်န် ( အိ အိ စိုး ) ဘဲ တာ ၀န် ယူ မှာ ပေါ့ ...၁ လ ထဲ ဘဲ လေ..ကို ညီ ကို လဲ ကြည့်ပေး ဖို့ပြော ခဲ့မှာ ပါ....) ( ကောင်း ပြီ လေ..ယု မာ ဒီ က နေ လာ ခဲ့အုံး မယ်...မ မ ကြီး ဘယ် အ ချိန် အိမ် ပြန် ရောက် မ လဲ...) ( ခ ရစ် စ မတ်စ် အ တွက် တော် တော် ဘစ် ဇီး ဖြစ် နေ တယ် ယု မာ ရေ ..ည နက် ဖို့များ တယ်...ဆိုင် ကို လာ ခဲ့လေ...) ( ကောင်း သား ဘဲ ..တွေ့မယ် မ မ ကြီး..ဆီး ယူး ....) ( အို ကေ ...ဘိုင်း...) ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ဝေ ဝေ ပေါ် ဦး ( ခေါ် ) မ ဝေ ဝေ ဝေ ပေါ် ဦး ကား ပွဲ စား တန်း မှာ သူ့အ တွက် ကား ရှာ ပေး နေ တဲ့ကား ပွဲ စား မော် တင် သိန်း နဲ့ချိန်း ထား လို့ရောက် နေ ပါ တယ်..။ ကျော် မင်း မောင် သူ့ကို မော် ဒယ် မ ချာ တိတ် လေး အ တွက် ပစ် သွား လို့လူ တ ကာ က သူ့ကို အ ပူ သယ် မ ထင် ရ လေ အောင် သူ ဟော့ပြီ..။ ဘဏ် မှာ ရှိ တဲ့ငွေ တွေ ထုတ် ပြီး လူ တ ကာ ကြား ထင် ထင် ရှား ရှား ဖြစ် အောင် အ နီေ၇ာင် ရဲ ရဲ BMW ၂ ယောက် စီး ပြိုင် ကား လေး ၀ယ် စီး မ လို့ပွဲ စား ကို ရှာ ခိုင်း ခဲ့တာ. .ရ ပြီ..လာ ကြည့်ပါ ဆို လို့တ ခါ မှ မ လာ ဘူး တဲ့ပွဲ စား တန်း ကို လာ ခဲ့တာ ပါ...။ ဒါ ပေ မဲ့သူ လဲ ကား ပေါ် က ဆင်း လိုက် ရော ယောင်္ကျား သား တွေ ရဲ့မျက် လုံး တွေ က သူ့ထ မိန် အ နောက် က စွင့်ကား တဲ့တင် သား တွေ အ ပေါ် မှာ ကပ် ညိ ပါ လာ ကြ တယ် လို့သူ ခံ စား နေ ရ သ လို ဘဲ...။ ဟင်း...နောက် ဆို ရင် ဘယ် တော့မှ ဒီ ကို မ လာ ဘူး....တ ခြား နေ ရာ မှာ ချိန်း ရင် ရ ရဲ့သား နဲ့ ..ခွေး ကောင် လေး.....မော် တင် သိန်း ဆို တဲ့ချာ တိတ် ကို စိတ် ထဲ က ဆဲ နေ မိ တယ်..။ မော် တင် သိန်း က ကား က သန့်ပြီး မြန် မာ ပြည် မှာ ဒီ ကား မျိုး ရှား တဲ့အ တွက် သူ က ရ အောင် ရှာ နိုင် တာ ကို ဂုဏ် ယူ ၀င့်ကြွား နေ တဲ့ပုံ ဖြစ် နေ တယ်...။ ကား က တော့တော် တော် လှ တယ်...။ မော် တင် သိန်း က ( အ မ ..မောင်း ကြည့်လေ ..ဘာ ဆွဲ သ လဲ မ မေး နဲ့ ... ခြောက် လုံး အင် ဂျင် ..မောင်း ကြည့်ရင် ကြိုက် သွား စေ ရ မယ်....) ဆို ပြီး 10 ကား သော့လေး ကမ်း ပေး တယ်...။ ( အ မ လေး မော် မော် ရယ်..ဓါတ် ဆီ ဖိုး နဲ့မွဲ နေ ပါ့မယ်.....) ( ဟာ ဗျာ..အ မ တို့အ တွက် ဓါတ် ဆီ ဖိုး ဆို တာ ပါး ပါး လေး ပါ လေ....စ ကား ထဲ ထည့်ပြော မ နေ ပါ နဲ့အ မ ရယ်...) ဝေ ဝေ ပေါ် ဦး ငါး စိမ်း မြင် ငါး ကင် ပစ် သွား တဲ့ကျော် မင်း မောင် ကို စိတ် နာ ပေ မဲ့ဒီ လူ ရဲ့အ ကြောင်း ကို သိ နေ တာ ကြာ ပြီ လေ..။ သူ့ကို တ ဏှာ နဲ့ဘဲ အ ခြေ ခံ ပြီး စ တွေ့ခဲ့ဆုံ ခဲ့တာ ပါ..။ ကျော် မင်း မောင် လောက် တ ဏှာ ကြီး တဲ့ယောင်္ကျား ဒီ တိုင်း ပြည် မှာ ရှိ မယ် မ ထင် ဘူး လို့မ ဝေ ထင် တယ်....။ အင်း လေ...မ ဝေ က ရော ဘာ ထူး လဲ...။ အ သွင် တူ လို့အိမ် သူ ဖြစ် တာ လို့သိပ် နီး ကပ် တဲ့ဘော် ဒါ တွေ က ပြော ကြ တာ ဘဲ...။ ကျော် မင်း မောင် မ ဝေ နဲ့ရ ပြီး ခါ စ လောက် ဘဲ မ ဝေ နဲ့နေ့၎ ည ၆ ထ မင်း စား ပြီး၁ လိုး လိုက် ကြ တာ နေ့ေ၇ာ ည ပါ ..။ မင်း တုန်း မင်း ကြီး ရဲ့ခါး ၀တ် တော် က လိုး လွန်း လို့သုတ် တွေ စို နေ လို့ခြေ နဲ့ခပ် ပြီး ချွတ် လိုက် ရင် နံ ရံ မှာ ဘတ် က နဲ ကပ် သွား ရ တယ် လို့စာ အုပ် တ အုပ် မှာ ဖတ် ဘူး ခဲ့ တယ် လေ..။ ကျော် မင်း မောင် က အဲ ဒီ လို မျိုး တ အား လိုး တဲ့လူ...။ တ နေ့တ နေ့ဒါ ဘဲ စဉ်း စား နေ တာ..။ သူ့ညီ နဲ့တော့တ ခြား စီ ဘဲ..။ ညီ ညီ က စိတ် တော် တော် ထိန်း နိုင် တဲ့ကောင်..။ သူ နဲ့ကျော် မင်း မောင် ဘတ်စ် ကား ပေါ် မှ ထောက် ကြ ရင်း ထန် ကြ ရင်း စ တွေ့ကြ တာ လို့သူ တို့အ သိုင်း အ ၀ိုင်း မှာ ပြော ရင် လူ တွေ က နောက် ပြောင် တာ လို့ထင် ကြ တယ်..။ ဘယ် သူ မှ မ ယုံ ကြ ဘူး...။ ဘာ လို့လဲ ဆို တော့ကျော် မင်း မောင် ရော မ ဝေ ရော မွေး က ထဲ က ဘတ်စ် ကား စီး တဲ့သူ တွေ မ ဟုတ် ကြ လို့ဘဲ..။ ကျော် မင်း မောင် နဲ့မ ဝေ စ ပြီး ချိန်း လိုး ကြ က ထဲ က အဲ ဒီ ဗိုလ် အောင် ကျော် လမ်း က တိုက် ခန်း မှာ ညီ ညီ နဲ့စ တွေ့ဘူး တာ ...။ ကျော် မင်း မောင် နဲ့သူ ပွဲ ကြမ်း ကြ တဲ့အ ချိန် တွေ မှာ ညီ ညီ က များ သော အား ဖြင့်အ ပြင် ခန်း မှာ ရှိ နေ တတ် တယ်..။ ကျော် မင်း မောင် သူ့စောက် ဖုတ် ကို ယက် ရင် အ သံ တ အား ထွက် တာ..။ လိုး ဆောင့်ကြ ရင် လဲ တ ဖွတ် ဖွတ် တ ဖပ် ဖပ် အ သံ တွေ ညံ နေ တာ ဘဲ..။ ကြာ တော့ညီ ညီ့ကို ဂ ရု မ စိုက် ကြ တော့ဘဲ သူ့ရှေ့မှာ တောင် ကို ကို ကျော် က မ ဝေ ကို နို့ဖမ်း နယ် ချင် နယ် တာ...။ ဒါ ပေ မဲ့ညီ ညီ က သူ့အ ပေါ် ဘာ မှ မ ၇ိုး မ သား ဒီ နေ့အ ထိ မ ရှိ ခဲ့ဘူး..။ မ ဝေ က သာ သူ့သား ရဲ့မွေး နေ့ည ပါ တီ တုံး က မှောင် ထဲ မှာ အ ရက် က လဲ မူး နေ တော့ညီ ညီ့လီး ကို စမ်း ခဲ့ကိုင် ခဲ့ဘူး တယ်...။ ညီ ညီ က သူ့အ ကို ပေါ် မှာ သ စ္စာ ရှိ ခဲ့တာ မ ဝေ ကို ရှောင် ပြေး ခဲ့တယ် လေ...။ ကို ကို ကျော် က တော့သူ့ညီ အ ကြောင်း မ ဝေ ကို ပြော ပြ ဘူး တာ တော့သူ့ညီ လဲ စောက် ပတ် တ အား ကြိုက် တာ ဘဲ ..သူ လဲ င လိုး ဘဲ..တဲ့ ...။ မ ဝေ လဲ ကို ကို ကျော် နဲ့ရ ပြီး နောက် လင် ညီ အ မ တော် လာ တဲ့ခိုင် ချို မာ နဲ့လဲ တွဲ မိ ကြ တာ ပေါ့ ...။ တ နေ့ခိုင် ချို မာ နဲ့မ ဝေ ၀ိုင် အ ကောင်း စား တ ပု လင်း ဖေါက် ကြ တယ်..။ တော် တော် ကြီး အ ရှိန် ရ လာ ကြ တော့ထုံး စံ အ တိုင်း စ ကား တွေ ဟို ပြော ဒီ ပြော ဖြစ် လာ ကြ တယ်..။ ခိုင် ချို မာ က မေး တယ်..။ မ ဝေ ..ကို ကို ကျော် က ဒီ လောက် တ ဏှာ ကြီး တယ် လို့မ ဝေ အ မြဲ ပြော နေ တာ..မ ဝေ ကို အ နောက် ပေါက် ကို မ လုပ် ဘူး လား...တဲ့ ...။ မ ဝေ လဲ ( ဘယ် နေ မ လဲ ခိုင် ချို ရယ်....ရှေ့ရော အ နောက် ကော ပါး စပ် ရော ...) လို့ဖြေ ခဲ့တယ် လေ..။ ခိုင် ချို မာ က ( ကို ညီ က တော့လို ချင် လို့တောင်း ဘူး တယ်.. ခ ဏ ခ ဏ ဘဲ..ခိုင် ချို က မ ပေး ဘူး... သူ က အ နောက် ဖက် ကို အ မြဲ ပါး စပ် နဲ့လုပ် ပေး တယ်..) လို့ပြော ဘူး တယ်..။ (ဟယ်...ဖင် ပေါက် ကို ယက် ပေး တယ် ....ဟုတ် လား...) မိ သား စု ၂ စု အ တူ င ပ လီ သွား ကြ တော့မ ဝေ က အ စော ကြီး ထဲ က ရေ ထဲ ဆင်း နေ ခဲ့လို့လူ တွေ ရေ ထဲ ဆင်း ကြ တော့မ ဝေ က ဘန် ဂ လို က ရေ ချိုး ခန်း ထဲ မှ ရေ ချိုး နေ ပြီ လေ..။ ညီ ညီ လဲ အိမ် သာ တက် ချင် လို့ထင် တယ်..။ေ၇ ချိုး ခန်း နဲ့အိမ် သာ က တ ဆက် ထဲ မို့သူ တံ ခါး ဆွဲ ဖွင့်ပြီး ၀င် လာ တော့မ ဝေ ကို သူ ကိုယ် တုံး လုံး ကြီး တွေ့လိုက် တာ ပေါ့ ..။ မ ဝေ လဲ ဘာ မှ ဖုံး ကာ တာ မ လုပ် ဘဲ ညီ ညီ့ကို ( မ ဝေ ..ကိုယ် လုံး ဘယ် လို လဲ ကြည့်ကောင်း ရဲ့လား) လို့မေး တာ သူ ထွက် ပြေး သွား ခဲ့တယ်...။ ကို ကို ကျော် ကို စ တီ ရီ ယို သီ ချင်း တွေ ဆို တဲ့တ ခွေ ထုတ် ကောင် မ တ ယောက် နဲ့သူ့ရုံး ခန်း ထဲ မှာ လိုး နေ ကြ တာ မ ဝေ မိ ဘူး တယ် လေ..။ မ ဝေ နဲ့ကို ကို ကျော် အ ကြီး အ ကျယ် စ ကား များ ကြ တာ ပေါ့ ..။ ကောင် မ က လဲ ကိုယ် တုံး လုံး နဲ့ဖင် ထောင် ကုန်း ပေး နေ တာ ...မ ဝေ လဲ ၀င် ပြီး ၂ ယောက် လုံး ကို ပါး ဆွဲ ရိုက် ပစ် တယ် လေ..။ နောက် တ ခါ ကျ တော့ရုပ် ရှင် ထဲ ဖြတ် လျောက် အ ခန်း တွေ ( ဆိုက် ပတ် ) တ ခါ တ လေ ပါ ဘူး တဲ့ကောင် မ တ ယောက် နဲ့ကို ကို ကျော် ဘိုက် ကြီး တယ် ဆို ပြီး ကောင် မ က ကို ကို ကျော် ကို တ ရား စွဲ တာ ဖြစ် ပြန် တယ်...။ မ ဝေ နဲ့သူ ဒီ တ ခါ တော့ဒီ လောက် ရန် မ ဖြစ် တော့ဘူး..။ မ ဝေ လဲ သူ့ကို စိတ် ကုန် နေ ပြီ ..။ ခွေး မြီး ကောက် ကျည် တောက် စွပ် ...ဘဲ...။ တ သက် လုံး ကောင်း မှာ မ ဟုတ် ဘူး..။ သူ တ ရား ရုံး သွား ပြီး ရင် ဆိုင် တယ်..။ ညှိ ရ တာ ပေါ့..။ သ င်္ဘော သား တင် တဲ့အေး ဂျင့်ရက်ပ် လုပ် နေ တဲ့ကို ကို ကျော် အ တွက် က ငွေ ပုံ ပေါ် ထိုင် နေ တဲ့လူ မို့ကောင် မ တောင်း သ လောက် ပေး 11 ပြီး ညှိ ကြ လို့ပြီး သွား ပါ တယ်..။ နောက် မှ သိ ရ တာ က ကောင် မ က ဖန် တာ ပါ..။ ဆေး စာ အ တု တွေ နဲ့ဘိုက် ရှိ တယ် လို့ဆင် တာ ပါ..။ တ ကယ် က လေး မ ရှိ ပါ ဘူး...တဲ့ ...။ ကို ကို ကျော် လဲ နောက် ပိုင်း မှာ မ ဝေ နဲ့လိုး တာ လဲ တ ဖြေး ဖြေး ကျဲ လာ တယ် ..။ မ ဝေ လို တဲ့ငွေ ကြိုက် သ လောက် ဘဏ် က ထုတ် သုံး နေ နိုင် အောင် သူ စီ စဉ် ထား ပေး တယ် .။ မ ဝေ လဲ လော က ကြီး မှာ ပျော် ပျော် ဘဲ မိ သား စု တွေ နဲ့နေ နေ လိုက် တယ်..။ ကို ကို ကျော် နဲ့မ လိုး တာ ကြာ တော့လဲ မ ဝေ ဆာ လာ တယ်..။ လီး ဆာ လာ တယ် ..။ ဒါ ကြောင့်လဲ ကို ညီ့ကို စမ်း မိ တာ ပေါ့ ..။ နောက် ဆုံး တော့ကို ကို ကျော် သူ့ကို ထား ခဲ့ပြီး လစ် ပြေး တော့တာ ဘဲ..။ တ နေ့ယု ယု မာ နဲ့တွေ့ကြ တယ်..။ တ နေ ရာ မှာ ၀ိုင် အ နီ ပု လင်း ဖေါက် ကြ ပြီး စ ကား ပြော ကြ တော့ယု ယု မာ က ခိုင် ချို က ပေး မ လိုး တော့တာ ကြောင့်ညီ ညီ လဲ အ ရမ်း ဆာ နေ တယ် ဆို တာ သိ ရ တယ်..။ တတ် နိုင် ရင် မ ဝေ ပြေး ပြီး သူ့ကို ကူ ညီ လိုက် ချင် ပါ တယ်..။ သူ လို တာ တွေ ကို ခိုင် ချို့ကိုယ် စား မ ဝေ ပေး လိုက် ချင် ပါ တယ်..။ သူ က တော့မ ဝေ အ သက် ကြီး လာ လို့ကြိုက် ပါ တော့မ လား တော့မ သိ ဘူး...။ ဒီ ကြား ထဲ မှာ ကို ကို ကျော် နဲ့မ ဝေ ခွါ ပြဲ တာ သိ တဲ့အ နား ပတ် ၀န်း ကျင် က လူ ရင်း ထဲ က လဲ မ ဝေ ကို ဖန် တာ တွေ ပေါ် လာ တယ်..။ အ စော ကြီး ထဲ က စား ချင် လို့ချောင်း နေ တဲ့လူ ဘဲ ဖြစ် မှာ ပါ..။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ စင် သီ ယာ စင် သီ ယာ ဆ ရာ နဲ့ပတ် သက် ပြီး စင် သီ ယာ့စိတ် ထဲ မှာ မြို သိပ် ထား နေ ရ တာ တွေ ရှိ နေ ပြီး ကြာ လာ တော့လဲ ရင် နဲ့အ ပြည့်ဖြစ် လာ ပြီး တင်း ကျပ် နေ ရ တယ် လို့စင် သီ ယာ ထင် တယ်..။ ဆ ရာ ဆို တာ က စင် သီ ယာ့ရဲ့အ လုပ် ရှင် ဦး ဖေ ၀င်း မောင် ( ခေါ် ) ကို ညီ ညီ ပါ ...။ စင် သီ ယာ ဘွဲ့ရ ပြီး နောက် အ လုပ် ရှာ နေ ချိန် မှာ ဘဲ စင် သီ ယာ့ရီး စား ကို ၀င်း မောင် တင် က စင် သီ ယာ့ကို လမ်း ခွဲ ပြီး နောက် မိန်း မ တ ယောက် နဲ့လက် ထပ် သွား ခဲ့တယ် ..။ စင် သီ ယာ စိတ် တွေ လေ လွင့်ပြီး ဆ ရာ နဲ့တွေ့တယ်..။ ဆ ရာ့ကို စင် သီ ယာ အဲ ဒီ အ ချိန် ထဲ က သ ဘော ကျ ခဲ့တယ်..။ အ ရပ် မြင့်မြင့် ..အ သား လတ် လတ် ..နဲ့ကြည့်ကောင်း တဲ့ဆ ရာ့လို လူ ကို မိန်း မ တွေ သ ဘော ကျ ကြ မှာ ပါ ..။ ဆ ရာ့အ လုပ် က အဲ ဒီ တုံး က စ ခါ စ ဘဲ ရှိ ပါ သေး တယ်..။ စင် သီ ယာ ဆ ရာ့အ လုပ် မှာ ၀င် တဲ့အ ချိန် လ စာ က အ ဓိ က မ ဟုတ် ဘူး ဆို ပြီး စ လုပ် ခဲ့တာ ပါ..။ စင် သီ ယာ လဲ ဆ ရာ့အ ပေါ် အ စ စ သ စ္စာ ရှိ ခဲ့ပြီး ကိုယ့်စီး ပွါး လို ဘဲ သ ဘော ထား လုပ် ခဲ့တယ်..။ ဒု တိ ယ ဆိုင် ထပ် ဖွင့်နိုင် လာ တော့စင် သီ ယာ့ကို ဆ ရာ က မန် နေ ဂျာ အ ဖြစ် တာ ၀န် ယူ ခိုင်း ခဲ့တယ်..။ လ စာ က လဲ ၀ုန်း က နဲ ခုန် တက် သွား တာ ပေါ့ ...။ ဆ ရာ က စီး ပွါး လုပ် တဲ့နေ ရာ မှာ အောင် မြင် ပြီ ဆို ပြီး ( တက် ထောင် ) တတ် တဲ့လူ မ ဟုတ် တော့နေ့ရော ည ပါ ဆိုင် တွေ ကို သူ ကိုယ် တိုင် ဦး စီး ပြီး လုပ် ပါ တယ်..။ စင် သီ ယာ ရဲ့လှည်း တန်း က ဆိုင် မှာ လဲ သူ ည ဖက် အ ထိ ( ဆိုင် ပိတ် ) တာ ၀န် မှာ စင် သီ ယာ နဲ့အ တူ လုပ် ခဲ့တဲ့ည တွေ အ များ ကြီး ပါ..။ စင် သီ ယာ လဲ ကို ၀င်း မောင် တင် နဲ့ရီး စား တုံး က သူ နဲ့ဘဲ ယူ ကြ မှာ သေ ချာ သ လောက် မို့ကို ၀င်း မောင် တင် ကို စင် သီ ယာ့ကိုယ် ကို သ ဘော ရှိ သူ့ကို ပေး ခဲ့ပါ တယ်..။ ရိုင်း ရိုင်း ပြော ရ မယ် ဆို ရင် စင် သီ ယာ သူ့ကို ပေး လိုး ခဲ့တယ် လေ..။ ကို ၀င်း မောင် တင် က လူ ပုံ က စာ ခြောက် သ လို လို နဲ့ ..။ တ ကယ့်ကို လိုး နိုင် တဲ့လူ ပါ...။ စင် သီ ယာ့ကို သူ က ကာ မ ပ ညာ တွေ ပို့ချ ပေး ခဲ့တဲ့လက် ဦး ဆ ရာ ပါ..။ သူ သင် ပေး လို့စင် သီ ယာ လဲ လီး ကောင်း ကောင်း စုတ် တတ် ခဲ့ရ သ လို ..အ ပေါ် က တက် မြင်း စီး သ လို တက် လိုး တာ လဲ ကောင်း ကောင်း တတ် ခဲ့ရ တယ် လေ..။ သူ က ခွေး လိုး ပုံ စံ ( Doggy style ) သိပ် ကြိုက် တယ် ဆို လို့လဲ စင် သီ ယာ သူ့စိတ် ကြိုက် ကုန်း ပေး ခဲ့တယ်..။ သူ့လီး ကို တော့တ နေ့၃ ကြိမ် လောက် စုတ် ပေး ခဲ့တာ ပါ..။ ခု တော့သူ စင် သီ ယာ့ကို စား လို့ဝ သွား လို့ထင် တာ ဘဲ..။ လမ်း ခွဲ သွား တာ ကြာ ခဲ့ပြီ ..။ ဆ ရာ့ကို အံ့သြ မိ တာ က စင် သီ ယာ လဲ ကို ၀င်း မောင် တင် နဲ့ကွဲ ပြီး ကြာ လာ တော့သ ဘာ ၀ စိတ် က ရှိ လာ ပြီး ( လီး ဆာ လာ တာ ) ဆ ရာ က လဲ အ နား မှာ ရှိ တော့ဆ ရာ နဲ့ည ဘက် အ ခန်း လေး ထဲ ငွေ တွေ ရေ ကြ..စာ ရင်း တွေ တွက် ကြ ရင် ..ဆ ရာ့ကို ရေ လာ မြောင်း ပေး လုပ် ခဲ့ပေ မဲ့ဆ ရာ က တုပ် တုပ် မ လှုပ် ခဲ့ဘူး...။ တ ကယ် ဆို စင် သီ ယာ နဲ့ဆ ရာ ငြိ စွန်း ဖို့သိပ် ကောင်း တဲ့အ နေ အ ထား ပါ..။ 12 အား လုံး ပြန် ကုန် ကြ တဲ့ည အ ချိန် ဆိုင် မှာ ၂ ယောက် ထဲ.. လေ..။ ဆိုင် ရဲ့ထပ် ခိုး က စင် သီ ယာ့ရုံး ခန်း မှာ ၂ ယောက် ထဲ ပေါ့ ..။ ဒါ နဲ့စင် သီ ယာ လဲ အိမ် ပြန် ရောက် တော့ပြီး..( ဆ ရာ ဘာ လို့ငါ့ကို မ လုပ် ပါ လိမ့် ..ငါ များ ပုံ မ လာ လို့လား....) ဆို ပြီး ကိုယ် လုံး ပေါ် မှန် ကြီး ထဲ အ ၀တ် အား လုံး ချွတ် ပြီး ကြည့်မိ ခဲ့ရ တယ်..။ စင် သီ ယာ လဲ နေ့စဉ် လေ့ကျင့်ခန်း တွေ လုပ် ခဲ့တာ ကြောင့်ခါး က သေး ... ၀မ်း ဘိုက် က ချပ် ပြီး ရင် နဲ့တင် တွေ ဟာ လဲ တင်း မာ တောင့်တင်း နေ ဆဲ ပါ လေ..။ အ မေ ရိ ကန် သ မ တ ဘီလ် က လင် တန် ကို သူ့ရုံး မှာ လာ လုပ် အား ပေး တဲ့မော် နီ ကာ လ ၀င်း စ ကီး ဆို တဲ့ကောင် မ က ဆွယ် တာ ဘီလ် က လင် တန် ပါ သွား တာ တွေ့ရ တော့( အင်..စင် သီ ယာ ..၀ တုတ် တုတ် နဲ့မော် နီ ကာ တောင် က လင် တန် ပါ သွား အောင် ဆွယ် နိုင် တာ နင် က ကိုယ် လုံး က လဲ မော် နီ ကာ ထက် အ ပြတ် သာ တယ် ..နင် မ ဆွယ် နိုင် တာ ..နင် တယ် ညံ့ပါ လား)...လို့ကိုယ့်ဖါ သာ အ ပြစ် တင် နေ မိ တာ..။ စင် သီ ယာ့အ နေ နဲ့ဆ ရာ့အိမ် ထောင် ကို ဖျက် စီး ချင် တာ မျိုး မ ဟုတ် ပါ ဘူး ရှင်..။ ဆ ရာ နဲ့တိတ် တ ဆိတ် အ လုပ် ဖြစ် ကြ ရင် ဘဲ ကျေ နပ် နေ မှာ ပါ..။ ကိုယ့်အ ပေါ် ကောင်း တဲ့ဆ ရာ့ကို လဲ ကိုယ် တတ် နိုင် တာ လေး နဲ့ပြု စု ချင် တာ ပါ..။ မော် နီ ကာ လ ၀င်း စ ကီး က အ လုပ် စား ပွဲ အောက် ထဲ က နေ သ မ တ ဘီလ် က လင် တန် ကို လီး ကောင်း ကောင်း စုတ် ပေး ခဲ့သ လို စင် သီ ယာ လဲ ဆ ရာ့ကို စုတ် ပေး ချင် ခဲ့တာ ပါ ဆ ရာ ရယ်...။ စင် သီ ယာ စိတ် ကူး ယဉ် တာ တွေ ...ပေါ့ ....။ ဆ ရာ့ကို မှန်း ပြီး စင် သီ ယာ လေ..ကိုယ့်စောက် ဖုတ် ကို ကိုယ် ပွတ် ပြီး အာ သာ ဖြေ နေ ခဲ့တာ ကြာ လာ ပါ ပြီ ဆ ရာ ရယ်...။ အ လုပ် အ တူ လုပ် တာ ကြာ လာ တော့တ နေ့ဆ ရာ့ကိုယ် ပေါ် ကို မ တော် တ ဆ ဆီ တွေ ဖိတ် ကျ ခဲ့တော့ဆ ရာ စင် သီ ယာ့ရုံး ခန်း မှာ ရှိ နေ တဲ့ေ၇ ချိုး ခန်း မှာ ဆိုင် သိမ်း ပြီး ချိန် ရေ ချိုး တယ်..။ ဆ ရာ မ သိ လိုက် ပေ မဲ့စင် သီ ယာ လေ....မိန်း မ တန် မဲ့ဆ ရာ့ကို ချောင်း မိ တယ်..။ စင် သီ ယာ့ရေ ချိုး ခန်း မို့ဘယ် က နေ ချောင်း ရ မယ် ဆို တာ စင် သီ ယာ သိ တယ် လေ....။ ဆ ရာ့ပေါင် ကြား က မ တောင် သေး တာ တောင် တော် တော် ကြီး တုတ် ပြီးရှည် လျား နေ တဲ့ဆ ရာ့ ဖွား ဖက် တော် ကြီး ကို အ ငမ်း မ ရ သွား ရေ ယို မိ ခဲ့ပါ တယ်...ဆ ရာ....။ စင် သီ ယာ လဲ အဲ ဒီ ည က ဆ ရာ့ရဲ့ညို တုတ် တုတ် အ တန် ကြီး ကို မြင် မိ တာ နဲ့ပေါင် ကြား မှာ အ ရေ တွေ ဗ လ ပွ ယို စီး ကျ လာ ရ တယ် ဆ ရာ..။ ဆ ရာ့ကို ရေ လာ မြောင်း ပေး လုပ် ခဲ့မိ တာ တွေ လဲ ဆ ရာ က သိ တောင် မှ သိ ရဲ့လား..။ စင် သီ ယာ့လှည်း တန်း ဆိုင် ကို ဆ ရာ မ အား လို့မ လာ တဲ့ည တွေ ဆို ရင် စင် သီ ယာ စိတ် မ ပျော် ဘူး ...သိ လား..။ အ ထီး ကျန် ဆန် လွန်း တဲ့ဘ ၀ ကို တ ခါ တ ခါ တော့လဲ စိတ် အ ရမ်း ပျက် မိ တယ်...။ ပြီး ခဲ့တဲ့အ ပတ် က စင် သီ ယာ့အ မေ ဆေး ရုံ တက် ရ တယ်..။ အ ထူး ကု ဆ ရာ ၀န် က အ မေ့ကို ခွဲ စိတ် ရ မယ် ပြော တော့ကုန် ကျ မဲ့ငွေ က စင် သီ ယာ့မှာ ရှိ တာ ထက် အ များ ကြီး ပို နေ တယ်..။ တ ညင် မှာ ရှိ တဲ့မြေ ကွက် ကို ရောင်း လိုက် ရင် တော့ငွေ ပေါ် မှာ ဖြစ် ပေ မဲ့အ မေ ဆေး ရုံ တက် ခွဲ စိတ် ဖို့က အ ချိန် မ စောင့်နိုင် တော့ဘူး..။ စင် သီ ယာ လဲ ဘယ် က မှ မ ရ နိုင် တော့ဆ ရာ့ဆီ ဘဲ ပြေး ခဲ့ရ တယ်..။ ဆ ရာ က ချက် ချင်း ကူ ရုံ တင် မ က ဘူး..ခွင့်တောင် ယူ ခိုင်း လိုက် တယ်...။ အ မေ ခွဲ စိတ် တာ တွေ ပြီး တော့အ လုပ် ပြန် တက် မယ် ဆို ပြီး ဆ ရာ့ဆီ ဖုန်း ခေါ် တော့ဆ ရာ က မ တက် နဲ့အုံး ..မျိုး ၀င်း ကို လှည်း တန်း ဆိုင် မှာ ပို့ထား တယ်...ဘာ မှ မ ပူ နဲ့လို့ပြော တယ်...။ ဒီ နေ့တော့အ မေ လဲ သက် သာ ပြီး ညီ မ တွေ လဲ အ မေ နဲ့ရှိ တာ ကြောင့်ဆိုင် ကို လဲ စိတ် ပူ လာ တာ နဲ့ခ ဏ တော့သွား အုံး မယ် ဆို ပြီး ဆိုင် ကို ည နေ စောင်း မှာ ရောက် တယ်..။ ကို မျိုး ၀င်း က ဆ ရာ့ရဲ့အား ကိုး ရ တဲ့လူ ရင်း တ ပည့်ပါ ဘဲ..။ အား လုံး ပုံ မှန် လည် ပတ် နေ တာ တွေ့ရ တယ်..။ ကို မျိုး ၀င်း ဒီ ဆိုင် ကို လာ မ ကူ ခင် စင် သီ ယာ အင် ချပ် တာ ၀န် ပေး ခဲ့တဲ့( အောင် ကြီး ) က လဲ တော် တော် အ လုပ် ကျွမ်း နေ ပြီ..။ တော် တော် အား ကိုး ရ တယ်..။ စင် သီ ယာ ဆိုင် ကို ရောက် နေ တဲ့အ ချိန် ဆ ရာ့ရဲ့သူ ငယ် ချင်း ( ကို ထွန်း မြင့်ကျော် ) ဆိုင် မှာ ရောက် နေ တယ်..။ ကို မျိုး ၀င်း နဲ့စင် သီ ယာ့ရုံး ခန်း လေး မှာ စ ကား ပြော နေ ကြ တယ်..။ စင် သီ ယာ လဲ သူ တို့နဲ့စ ကား ခ ဏ ပြော ပြီး အိမ် သာ ထဲ ၀င် တယ်..။ ကို ထွန်း မြင့်ကျော် က ဆ ရာ့အ ကြောင်း ကို ပြော နေ တာ စင် သီ ယာ ကြား လိုက် ရ လို့နား စွင့်ကြည့်တော့ဆ ရာ့မိန်း မ ခိုင် ချို မာ က ဆ ရာ နဲ့လိင် မ ဆက် ဆံ တော့တာ ကြာ ပြီ.. ဒါ ကြောင့်ဆ ရာ ဆာ လောင် ပြီး စိတ် ဒု က္ခ ရောက် နေ တာ တဲ့ ...ဆ ရာ့ကို ကူ ညီ ချင် တယ် ...တဲ့ ..ဘယ် လို ကူ ညီ ရ မ လဲ မ သိ ဘူး..တဲ့ ..။ ကို မျိုး ၀င်း က လဲ ဆ ရာ့ကို အ ရမ်း ကြောက် ရ တော့ဘာ မှ ပြန် မ ဆွေး နွေး ရဲ ဘူး ထင် တာ ဘဲ..။ ကို ထွန်း မြင့်ကျော် ပြောတာ ကို ဘဲ နား ထောင် နေ တယ်..။ ဆ ရာ့မှာ ဒီ အ ခက် အ ခဲ ရှိ နေ တာ များ..စင် သီ ယာ့ကို ပြော ရော ပေါ့ ..။ ဒီ က သူ မ ဆွတ် ခင် ထဲ က ညွတ် ချင် နေ တဲ့သူ ပါ ..။ ဆ ရာ ဆာ လောင် နေ တာ တွေ ကို ဖြည့်ဆည်း ပေး မဲ့စင် သီ ယာ ရှိ နေ တာ ဆ ရာ့ကို ဘယ် လို ပြော ရ ပါ့မ လဲ..။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ 13 ဖေ ၀င်း မောင် ( ခေါ် ) ကို ညီ ဖေ ၀င်း မောင် မျိုး ၀င်း က လှည်း တန်း က ဆိုင် မှာ စင် သီ ယာ ရဲ့ကိုယ် စား သွား လုပ် နေ လို့သူ ကိုယ် တိုင် ဘဲ ရုံး ခန်း ကို စော စော သွား ဖွင့်တယ်..။. အ သစ် ခန့်တဲ့ခင် မေ ကျင် က အ ရိပ် ပြ အ ကောင် ထင် ပြီး တ ခု ခု ဆို တ ခါ ဘဲ ပြ ပေး ရ တယ်..။ မှတ် မိ နေ ပြီ.။ ရုံး ခန်း လာ ဖွင့်ဖို့တော့သူ မ လက် ကို သော့မ အပ် သေး..။ စော သေး တယ် ထင် လို့ ..။ရုံး ခန်း က ရုံး သာ ဆို တယ်..။ သူ့ဒု တိ ယ အိမ် ဆို လဲ မ မှား ဘူး..။ သူ့ကွန် ပြူ တာ..သူ့အိပ် ခန်း ..ရှိ နေ တယ်..။ ဖေ ၀င်း မောင် ကို မ နေ့က မန္တလေး က စား သောက် ဆိုင် ဖွင့်ချင် တဲ့ဟိုင်း ဘော့ စ် တ ယောက် က သူ တို့ဆီ မှာ ဆိုင် ခွဲ ဖွင့်ဖို့ဆွေး နွေး လို တာ ကြောင့်သူ့ဆီ ကို လာ ဖို့ဖိတ် ခေါ် တယ်..။ ကား မောင်း ရင်း ဒီ အ ကြောင်း စဉ်း စား နေ တာ..။ သူ့ဆီ က ဆိုင် ဖွင့်မဲ့တိုက် နဲ့နေ ရာ ကို ပြ ချင် တာ မို့လာ ဖို့ခေါ် တာ ပါ...တဲ့ ...။ ဖေ ၀င်း မောင် လဲ သွား ကြည့်ဖို့စိတ် ကူး နေ တယ်..။ သိပ် များ လာ ရင် မ နိုင် မှာ စိုး လို့ ..။ သူ့လူ ထဲ က အ လုပ် တော် တဲ့..စင် သီ ယာ တို့လို မန် နေ ဂျာ တ ယောက် ကို နေ ရာ သစ် မှာ အုပ် ချုပ် ခိုင်း ရ ရင် တော့သူ စိတ် ချ မှာ ဘဲ..။ မျိုး ၀င်း မ ရှိ တာ နဲ့သူ့ဖါ သာ ပါ ကင် ထဲ ကား သွင်း ပြီး သူ့ရုံး ဖက် ကို ပြန် လျောက် လာ တယ်..။ သူ့ေ၇ှ့မှာ ထိုး ဆိုက် လာ တဲ့ဘတ်စ် ကား တ စီး ပေါ် က ဆင်း လာ တဲ့ခင် မေ ကျင် ကို သူ တွေ့လိုက် တယ်..။ ခင် မေ ကျင် က သူ့ကို မ မြင် ဘူး..။ ခပ် သုတ် သုတ် ရုံး ဖက် ကို လျောက် နေ တယ်..။ ခင် မေ ကျင် က အ လုပ် ၀င် တာ လဲ ရက် ပိုင်း ဘဲ ရှိ သေး တော့သူ အ လုပ် ခွင် မှာ က လွဲ လို့ဘယ် မှာ မှ မ တွေ့ဘူး သေး ဘူး လေ..။ လမ်း မ ကြီး ပေါ် လူ တွေ ကြား မှာ အ နောက် ဖက် က နေ တွေ့ရ တဲ့မြင် ကွင်း ..။ ကောင် မ လေး တင် တွေ က တော် တော် တောင့်တာ ဘဲ ဆို တာ ခု မှ သ တိ ပြု မိ ရ တယ်..။ လမ်း လျောက် နေ တော့တင် တွေ က အ ပေါ် အောက် တုန် နေ တယ်..။ တင် ပါး မှာ ပင် တီ အ ရာ ထင် နေ တာ လဲ သူ တွေ့တယ်..။ ဟင်း...ငါ ဘာ ဖြစ် နေ ပြီ လဲ...။ အ ရမ်း ဘဲ တ ဏှာ ကြီး နေ ပြီ လား....။ ခင် မေ ကျင် ရုံး ပေါ် တက် တဲ့လှေ ခါး က တက် သွား တာ တွေ့တယ်..။ ဖေ ၀င်း မောင် လဲ သူ မ နောက် က နေ လိုက် မ တက် ချင် တော့တာ နဲ့အောက် ထပ် က ဆိုင် ထဲ လှမ်း ကြည့်လိုက် တော့မန် နေ ဂျာ ကို စိုး ဦး ကို တွေ့လို့သော့ခတ် ထား ဆဲ ဆိုင် တံ ခါး ကို ခေါက် လိုက် တယ်...။ ( ဟာ..ဆ ရာ...) ပြေး လာ ပြီး ဖွင့်ပေး တယ်..။ ( ဆ ရာ..စော တယ် နော်..) ( အင်း...မျိုး ၀င်း က လှည်း တန်း ဆိုင် မှာ လေ ...) ( ဆ ရာ ပိန် သွား သ လို ဘဲ...ဆ ရာ က အ လုပ် သိပ် များ လို့ထင် တယ်..) ဖေ ၀င်း မောင် ခင် မေ ကျင် ရုံး တံ ခါး ၀ မှာ စောင့်နေ မှာ သ တိ ရ သွား တယ်..။ ( ဟင့်အင်း...အ ပေါ် တက် လိုက် အုံး မယ်....) သူ တက် လာ တာ မြင် တော့ခင် မေ ကျင် ပြုံး ပြီး နုတ် ဆက် တယ်..။ ( ဂွတ် မော နင်း ...ဆ ရာ....) ( မော နင်း..ခင် မေ ကျင်....) သူ တံ ခါး ကို သော့ ဖွင့်တယ်..။ သူ့စား ပွဲ မှာ ထိုင် တော့ခင် မေ ကျင် က လ ဘက် ရေ ခွက် လာ ချ ပေး တယ်..။ ခင် မေ ကျင် အ လုပ် ၀င် ပြီး က ထဲ က သူ ခင် မေ ကျင် ဖျော် တဲ့လ ဘက် ရေ မ နက် တိုင်း သောက် နေ ပြီ...။ ခင် မေ ကျင် သူ့ရှေ့က ပြန် ထွက် သွား ရင် သူ့မျက် လုံး တွေ က ခင် မေ ကျင် ရဲ့ဝိုင်း ကား ပြီး တင်း မာ ဖု ထွက် နေ တဲ့တင် သား တွေ ဆီ ရောက် ရောက် သွား တယ်..။ အင်း....ဒီ ကောင် မ လေး တောင့်တယ်..။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ယု ယု မာ ယု ယု မာ နေ ပြည် တော် ကို အ လုပ် ကိ စ္စ နဲ့သွား ရ တယ် ..။ အ လုပ် တွေ ပြီး တော့မ န္တ လေး က ငယ် သူ ငယ် ချင်း မီ မီ ဘ တုတ် က သူ့ဆီ လှည့်ဝင် ခဲ့ပါ အ ရမ်း ခေါ် နေ တာ နဲ့သွား မယ် ဆုံး ဖြတ် လိုက် 14 တယ်..။ နေ ပြည် တော် ကို အ တူ လာ ခဲ့တဲ့လုပ် ဖေါ် ကိုင် ဖက် လဲ ဖြစ် ကျောင်း နေ ဖက် သူ ငယ် ချင်း လဲ ဖြစ် တဲ့နီ လာ မျိုး စိန် က ( ယု ယု ...ဒီ နေ ပြည် တော် မှာ ယူ့ခဲ အို ရဲ့ဆိုင် လာ ဖွင့်ထား တယ် ဆို ....) လို့မေး တယ်..။ ဒီ တော့မှ ယု ယု မာ ကို ညီ ရဲ့ဆိုင် ခွဲ တ ဆိုင် ဒီ မှာ ဖွင့်ထား တာ သ တိ ရ သွား တယ် ..။ ( ဟုတ် တယ်...နီ လာ ...ဘာ လဲ ယူ သွား ချင် လို့လား...) ( အင်း လေ..ဒို့တ တွေ လဲ အ လုပ် ပြီး နေ လို့အား နေ ကြ ပြီ ဘဲ..သွား ကြည့်ကြ မ လား...) ( ကောင်း သား ဘဲ ..ကိုယ် သိ တဲ့တ ယောက် ယောက် ရှိ ချင် ရှိ နေ နိုင် တယ်..) ယု ယု မာ များ သော အား ဖြင့်ကို ညီ ရဲ့ဆိုင် ၀န် ထမ်း တွေ ကို သိ တယ် လေ..။ ကို ညီ ရဲ့ဆိုင် ကို သူ တို့ရောက် တော့မန် နေ ဂျာ ဘယ် သူ လဲ မေး လိုက် တော့.. ကို ညီ့တ ပည့်ရင်း တ ယောက် ဖြစ် တဲ့( စိန် မြ သောင်း မင်း ) ဖြစ် နေ တယ်..။ စိန် မြ သောင်း မင်း က ယု ယု မာ ကို ပြာ ပြာ သ လဲ ဂ ရု စိုက် ပါ တော့တယ်...။ နီ လာ မျိုး စိန် ကို ကြက် ကြော် အ မျိုး မျိုး..ကြက် ကင် ..ကြက် ပေါင်း..မျိုး စုံ မြည်း ခိုင်း ခွင့်ရ တာ ပေါ့ ..။ ယု ယု မာ ရဲ့ဟမ်း ဖုန်း မြည် လာ တယ်..။ ( ဟင်...ကို ညီ့နံ ပါတ် ပါ လား....) ( ဟ လို..ကို ညီ လား....ယု မာ အ ခု ဘယ် မှာ ရောက် နေ လဲ ...သိ လား....) ( မ သိ ဘူး..ယု မာ ပြော ပြ မှ သိ မှာ ပေါ့ ...) ( ကို ညီ့ဆိုင် တ ခု ထဲ စား နေ တာ ..ယု မာ ရဲ့သူ ငယ် ချင်း ကို ခေါ် လာ တာ ..ဘယ် ဆိုင် လဲ ဆို တာ ကို ညီ ခန့်မှန်း ..) ( နေ ပြည် တော် က စိန် မြ ရဲ့ဆိုင် မ ဟုတ် လား....) ( ဟယ်..သူ ဘယ် လို သိ .....) (သိ ဆို...ဒို့က ဆိုင် ထဲ က ရုံး ခန်း မှာ လေ..ယု မာ ကို တွေ့နေ ရ တယ်...စီ က ရူ တီ ကင် မ ရာ က နေ ပြီး လေ...ကဲ..အ ထဲ ၀င် ခဲ့လေ...) ယု ယု မာ ဘယ် လို ၀မ်း သာ သွား သ လဲ မ ပြော ပြ နိုင် အောင် ပါ ဘဲ...။ ရုံး ခန်း ထဲ က ကို ညီ ဆီ ကို ဆယ် ကျော် သက် လေး လို ပြေး ၀င် သွား တယ်...။ နီ လာ မျိူး စိန် နဲ့ကို ညီ ကို မိတ် ဆက် ပေး တယ်..။ ယု ယု မာ တို့အ ပြန် ကို ညီ က လိုက် ပို့ပေး တယ်..။ နီ လာ တည်း တဲ့နေ ရာ ကို ပို့ပေး အ ပြီး သူ တို့၂ ယောက် ထဲ ရှိ တော့.. ယု ယု မာ က မ နက် ဖန် မန္နလေး သွား မဲ့အ ကြောင်း ပြော ပြ တယ်..။ ကို ညီ က သူ လဲ သွား မ လို့လို့ပြော တယ်..။ ( ဟယ်...ဒါ ဆို..ဒါ ဆို.....) ( ဒို့၂ ယောက် အ တူ တူ သွား ကြ တာ ပေါ့ .....) ( တ ကယ်.......) ယု ယု မာ ပျော် လိုက် တာ ... ( နီ လာ မျိုး စိန် က ရော မ လိုက် ဘူး လား...) ( ဟင်...ဘာ လို့မေး တာ လဲ....ဘာ လဲ...ကို ညီ က နီ လာ ကို သ ဘော ကျ သွား လို့လား....) ( မ ဟုတ် ပါ ဘူး..သူ ပါ လိုက် ရင် မ လွတ် လပ် တော့ဘူး လေ...ဒါ ကြောင့်မေး တာ ပါ...) အို ...ယု ယု မာ ရင် ခုန် သွား တယ်..။ ကို ညီ့စ ကား က ဘာ လို လို ကြီး....။ ( သူ က လေ ယာဉ် နဲ့ရန် ကုန် တိုက် ရိုက် ပြန် မှာ ...ရန် ကုန် မှာ အ လုပ် ရှိ လို့....) ကို ညီ က ယု ယု မာ တည်း တဲ့ဟို တယ်လ် ကို လိုက် ပို့တယ်..။ ( ဆင်း အုံး လေ..စ ကား လေး ဘာ လေး ပြော ရ အောင် ...) ကို ညီ ယု ယု မာ နဲ့ဟို တယ် အ ခန်း ထဲ ပါ လာ တယ်..။ ( ဘာ သောက် မ လဲ ကို ညီ ...ယု မာ မှာ ပေး မယ်...) ( မ သောက် တော့ပါ ဘူး ...ယု မာ..) ယု ယု မာ လဲ ဟို တယ် အ ခန်း ထဲေ၇ာက် တော့အ နောက် က လိုက် ၀င် လာ တဲ့ကို ညီ ကို အ မှတ် မ ထင် လှဲ့ကြည့်မိ လိုက် တော့သူ့တင် စိုင် တွေ ကို တပ် မက် ပြီး အ ရောင် တောက် နေ တဲ့မျက် လုံး တွေ နဲ့ကြည့်နေ တဲ့ကို ညီ ကို တွေ့လိုက် ရ တယ်..။ ယု ယု မာ က ဟို တယ် အ ခန်း ထဲ မှာ ကု တင် ပေါ် ထိုင် လိုက် တယ်..။ ( ကို ညီ မ န္တ လေး မှာ ဘယ် လောက် ကြာ မှာ လဲ... ယု မာ က ၂ ရက် လောက် နေ မယ် လို့စိတ် ကူး ထား တာ..သူ ငယ် ချင်း မီ မီ ဘ တုတ် နဲ့မ တွေ့တာ ကြာ လို့ ..ကို ညီ နဲ့ခု လို ဆုံ မယ် မှန်း မ သိ ဘူး လေ...) ( ဒို့က သိပ် တော့ကြာ ကြာ မ နေ နိုင် ဘူး...ဆိုင် ဖွင့်ချင် တဲ့လူ တ ယောက် နဲ့ဆွေး နွေး ဖို့သွား ရ မှာ လေ...ယု မာ ပြန် တဲ့အ ချိန် အ တူ ပြန် မယ် လေ..) ယု မာ ကို ညီ က သူ နဲ့အ တူ ပြန် မယ် ပြော လို့ဝမ်း သာ ကြည် နူး မိ တယ်...။ မ မ ကြီး ( ခိုင် ချို မာ ) ကြောင့်ကို ညီ အ လို မ ပြည့်ဖြစ် နေ ရ တာ ( ဆာ လောင် နေ တာ ) နဲ့သူ လဲ လင် ဖြစ် တဲ့သူ မ လိုး နိုင် တော့လို့ဆာ လောင် နေ ရ တာ ကို ခု လို မ ထင် မှတ် ဘဲ လာ ဆုံ တဲ့အ ချိန် မှာ ဖြေ ရှင်း ပစ် လိုက် ချင် မိ တယ်..။ ခု န ကို ညီ က လဲ သူ့တင် တွေ ကို စား ချင် ၀ါး ချင် သ လို ကြည့်နေ တာ တွေ့လိုက် ရ တယ် လေ..။ 15 ( ကို ညီ ..ထိုင် ..ဒီ မှာ....) သူ့ဘေး က ကု တင် ပေါ် မှာ ထိုင် ဖို့ပြ လိုက် တယ်..။ ( ပြော စ ရာ ရှိ လို့ ..) ( ဘာ လဲ ယု မာ ...ပြော လေ..) ( ကို ညီ..မ မ ကြီး က အိပ် ခန်း ခွဲ အိပ် ပြီး အ တူ တူ..ဟို ဟာ မ လုပ် တော့လို့တော် တော် ခက် ခဲ နေ လား ဟင်..တော် တော် အ နေ ရ ခက် နေ လား...) ( ဟာ..ယု မာ..ဘာ တွေ လာ မေး နေ တာ လဲ...) ( မ ရှက် ပါ နဲ့ကို ညီ ရယ်...ခု လို ၂ ယောက် ထဲ မ ထင် မ မှတ် ဘဲ တွေ့တဲ့အ ချိန် ..ဘယ် သူ မှ မ သိ တဲ့အ ချိန် မေး တာ ဘဲ ဥ စ္စာ.....) ( အင်း..ယု မာ ...အ နေ ရ တော့သိပ် ခက် တာ ပေါ့...ဘာ ဖြစ် လို့မေး တာ လဲ...) ( ယု မာ ..တ ခု ခု လုပ် ပေး ချင် လို့ပေါ့ ..ကို ညီ့ကို စိတ် ချမ်း သာ စေ ချင် တယ် လေ...) ( ယု မာ ရယ် ..ကိ စ္စ မ ရှိ ပါ ဘူး..ရ ပါ တယ်...) ယု မာ လဲ သူ့ပေါင် တန် နှစ် ဖက် ကြား ကို လက် တင် လိုက် ပါ တော့တယ်..။ သူ ဆတ် က နဲ တွန့်သွား ပြီး ယု မာ ကို ကြည့်တယ်..။ ( ယု မာ တို့၂ ယောက် လုံး က အ တွေ့အ ကြုံ တွေ ရှိ ပြီး တဲ့အိမ် ထောင် သည် တွေ ဘဲ..ကို ညီ ရယ်...ရှက် မ နေ တော့ပါ ဘူး...ကို ညီ့ကို ပျော် စေ ချင် တယ်..ကို ညီ့ကို ကျေး ဇူး ဆပ် ချင် တယ်...) ( အို ...ဘာ အ တွက် လဲ ယု မာ...) ( အော် မ မ ကြီး နဲ့က လေး တွေ အ ပေါ် ကောင်း တဲ့အ တွက် ...ယု မာ တို့မိ သား စု ကို အ စ စ စောင့်ေ၇ှာက် တဲ့အ တွက်....ပေါ့ ..) ယု မာ ရဲ့လက် ချောင်း တွေ က သူ့ဖွား ဖက် တော် အ တန် ချောင်း ကို စမ်း ပြီး ဆုတ် ကိုင် လိုက် တယ်..။ အို ယု မာ ရယ်.....သူ တိုး တိုး လေး ညည်း လိုက် တယ်.....။ ယု မာ ဖွ ဖွ လေး ကိုင် လိုက် တယ်...။ သူ့အ တန် ကြီး က ချက် ချင်း လို ဘဲ မာ ကျော ကြီး ထွား လာ တယ်......။ လက် နဲ့ဆုတ် ကိုင် ပြီး ဖွ ဖွ လေး နယ် ပေး နေ မိ တယ်....ကို ညီ့ကို သူ က စ ဖက် လိုက် တယ်...။ ( ကို ညီ ...ယု မာ လဲ လို ချင် နေ တယ် ကွာ..ပေး မှာ လား...) ( ဟူး...ကောင်း ပါ့မ လား ယု မာ ရယ်..ယု မာ ရော ဒို့ပါ အိမ် ထောင် ရှိ.. ) ယု မာ က သူ့ပါး စပ် ကို လက် ဖ ၀ါး လေး နဲ့ ပိတ် လိုက် တယ်..။ နောက် လက် တ ဖက် က တော့သူ့အ ချောင်း ကြီး ကို နယ် ပေး နေ ဆဲ ပါ ...။ သူ့နား နား ကို ကပ် ပြီး တိုး တိုး လေး..( ယု မာ ကို လိုး ပေး ပါ ကွာ...နော်..) လို့ပြော လိုက် ပါ တယ်..။ သူ့လုံ ချည် စ ကို ဖြေ လိုက် တယ် ..။ ဆွဲ ချွတ် လိုက် တယ်..။ အ တွင်း ခံ ဘောင်း ဘီ အောက် က ဖု ပြီး ငေါ ထွက် နေ တာ ကြီး ကို တပ် မက် နေ ပြီ..။ ယု မာ အ တွင်း ခံ ဘောင်း ဘီ ကို ပါ ဆွဲ ချွတ် တော့ကို ညီ လဲ ထ ရပ် ပြီး ချွတ် ပေး လိုက် ပါ တယ်..။ ကို ညီ့အ ချောင်း ကြီး မတ် မတ် တောင် နေ တယ်..။ ယု မာ ဒီ အ ချောင်း ကြီး ကို ငယ် ငယ် လေး ထဲ က တပ် မက် ပြစ် မှား နေ ခဲ့ရ တာ လေ...။ ယု မာ ကိုင် ဆုတ် လိုက် ပြီး ပွတ် သပ် နေ မိ ပြီ...။ ( ယု မာ နမ်း ပေး မယ် နော်...) ခွင့်တောင်း တာ မ ဟုတ် ဘူး..။ အ သိ ပေး တာ ပါ..။ ကို ညီ့ကို ကု တင် ပေါ် လှဲ ခိုင်း လိုက် ပြီး ယု မာ လိင် တန် ကြီး ရဲ့ထိပ် ဖူး ဒစ် ကို လှမ်း ငုံ လိုက် ပါ တယ်...။ ( အာ...အို...ယု မာ ရယ်....) ကို ညီ ညည်း တယ်..။ ယု မာ က အ စိမ်း မ ဟုတ်..။ ကျွမ်း ပြီး သား ..၀ါ ရင့်နေ တဲ့သူ လေ..။ ကို ညီ့ဒစ် ဖျား ကို ငုံ ထား ပြီး လျာ က စား ပေး နေ တာ..။ ကို ညီ တ အင်း အင်း ဖြစ် နေ တယ်..။ ယု မာ ဒီ အ ခွင့်အေ၇း ကို စောင့်နေ တာ ကြာ ပြီ လေ..။ ကို ညီ့ ကို အ ကောင်း ဆုံး ပြု စု မယ် လို့စိတ် ထဲ တေး ထား တာ ကြာ ခဲ့ပြီ ..။ ဒစ် ဖျား ကို ဘဲ က လိ လိုက် ..လျာ နဲ့ထိုး လိုက် စုပ် လိုက် လုပ် နေ ရာ က လီး တန် အ ရင်း ထိ ထိုး ငုံ လိုက် ပြန် တယ်..။ အ ရင်း က နေ အ ဖျား ရှည် လျား တဲ့ရှေ့ တိုး နောက် ငင် အ ၀င် အ ထွက် တွေ က ကို ညီ သ ဘော ကျ စ ရာ တွေ ပေါ့ ...။ ယု မာ လဲ ဂွေး စိ ၂ လုံး ကို လဲ ဖွ ဖွ လေး ကိုင် ပေး တယ်..။ ယု မာ စိတ် ရှည် ရှည် နဲ့စိမ် ပြေ န ပြေ ကို စုတ် ပေး တာ..။ ကို ညီ လဲ ယု မာ ရဲ့ရင် ဘတ် ကို လက် နဲ့လှမ်း စမ်း တယ်..။ သူ နို့ကိုင် ချင် လို့ထင် ပါ ရဲ့ဆို ပြီး ..ယု မာ အ င်္ကျီချွတ် ပေး လိုက် တယ်...။ ဘ ရာ ဇီ ယာ ဖြူ ဖြူ ဖွေး ဖွေး ထဲ က နို့၂ လုံး က အ တင်း ချုပ် စည်း ထား တာ ကို တင်း မာ ဖီး ထ နေ တဲ့နို့အ စုံ က ကျေ နပ် ပုံ မ ရ ..။ အ တင်း တိုး ထွက် ချင် နေ ကြ တယ်..။ 16 ဘ ရာ ချိတ် ကို ပါ ဖြုတ် ပေး လိုက် တယ်..။ အို ..လှ လိုက် တာ ယု မာ ရယ်.... ကို ညီ က ယု မာ နို့တွေ ကို ကြည့်ပြီး အ ရမ်း သ ဘော ကျ နေ တဲ့ပုံ ဘဲ..။ ယု မာ က လီး စုပ် နေ တာ မို့စ ကား မ ပြော နိုင် တာ မို့ကို ညီ့လက် ကို ဆွဲ ယူ ပြီး နို့ပေါ် မှာ တင် ပေး လိုက် ပါ တယ်..။ ကိုင် စေ ချင် တဲ့သ ဘော ဆို တာ ကို ညီ လဲ သ ဘော ပေါက် တယ်..။ နို့တ လုံး ကို ဖွ ဖွ လေး ကိုင် ကြည့်နေ တယ်..။ ( သိပ် လှ တာ ဘဲ...ယု မာ..) ယု မာ စုပ် နေ တဲ့လီး တန် ချောင်း ကို ပါး စပ် က ချွတ် လိုက် တယ်..။ ( စို့ပေး လေ.. ကို ညီ....) ကို ညီ က ယု မာ နို့တွေ ကို စို့တယ်..။ လျာ ထိပ် နဲ့ထိုး က လိ တယ်..။ နို့သီး ခေါင်း လေး တွေ ကို ဖွ ဖွ လေး မ နာ အောင် ကိုက် တယ်..။ ဒါ ကြောင့်မ မ ကြီး က ကို ညီ က သိပ် လုပ် တတ် ကိုင် တတ် တယ် လို့ပြော ဘူး တာ...။ ( ယု မာ တို့လုပ် ကြ ရ အောင် ကို ညီ ရယ်...) ယု မာ လဲ ၀တ် ထား တာ တွေ အ ကုန် ချွတ် ပစ် လိုက် တယ်..။ ကို ညီ က သူ့အ ၀တ် တွေ မ ချွတ် သေး ဘဲ ယု မာ ရဲ့အ၀တ် မဲ့ကိုယ် ကို ငေး စိုက် ကြည့်နေ တယ်..။ ( လှ လိုက် တာ ယု မာ ရယ် ...ဒို့အိပ် မက် များ မက် နေ သ လား...) ( ကို ညီ ...အိပ် မက် မ ဟုတ် ဘူး....တ ကယ် ...ယု မာ တို့ချစ် ကြ ရ အောင် ....ယု မာ လို ချင် လှ ပြီ....) ကို ညီ အ င်္ကျီချွတ် လိုက် တော့ယု မာ ကို ညီ့လက် ကို ဆွဲ ခေါ် ပြီး ကု တင် ပေါ် အိပ် ချ လိုက် တယ်..။ ကို ညီ့နှုတ် ခမ်း တွေ ကို ယု မာ က ဘဲ စ ပြီး စုပ် နမ်း တယ်..။ ကို ညီ့ပါး စပ် ထဲ ယု မာ လျာ က လေး က ကို ညီ့လျာ ကို ထိုး ဆွ တယ်...။ ကို ညီ က လဲ အား ကျ မ ခံ ပြန် နမ်း စုပ် လာ တယ်..။ ယု မာ က ကို ညီ့လီး ကို လှမ်း ကိုင် ကြည့်လိုက် တယ်..။ အာ...တောင် နေ တာ မှ တင်း ပြီး မတ် နေ တယ်..။ ယု မာ ပေါင် တွေ ကို ကား ဖွင့်လိုက် ပြီး ကို ညီ့လီး ကို သူ့စောက် ပတ် မှာ တေ့ပေး လိုက် တယ်...။ သူ ဆာ နေ တာ ကြာ ပြီ ..။ ခု မှ ဘဲ တုတ် ခိုင် ရှည် လျား တဲ့လီး တန် ကြီး နဲ့တွေ့ရ ပြီ..။ ကို ညီ က ယု မာ နို့ကို လှမ်း စို့လိုက် ပြီး သူ့လီး ကြီး ကို အ သာ ဖိ သွင်း လိုက် ပါ တယ်...။ ( အင်း...) လီး က တုတ် လို့လား..ယု မာ ဘဲ မ လိုး တာ ကြာ လို့စောက် ပတ် က ပြန် ကြုံ့သွား သ လား မ သိ.. တင်း ကျပ် နေ တယ်..။ ဒါ တောင် ယု မာ စိတ် တွေ ပြင်း ထန် လွန်း လို့စောက် ရေ တွေ က တ အား စို နေ တာ...။ ကို ညီ က တ ချက် ချင်း လိုး ဆောင့်ပါ တော့တယ်..။ ( ကောင်း လိုက် တာ..ကို ညီ ရယ်...) ယု မာ အောက် က နေ ကော့ပေး တယ်..။ ဖင် တွေ ကို စ ကော ၀ိုင်း မွှေ့ ပေး တယ်..။ ကို ညီ့ဆောင့် ချက် တွေ က မြန် လာ တယ်...။ ( ဆောင့် ...ဆောင့် ..ကို ညီ ...ဆောင့်ပါ....) ယု မာ အောက် က နေ ကော့ကော့ပေး ရင်း ကို ညီ့ကို တောင်း ဆို မိ ရ တယ်...။ ကို ညီ က ယု မာ ရဲ့ဖင် အောက် ကို လက် လျို ပြီး ဖင် သား တုံး တွေ ကို ဆုတ် ကိုင် ပြီး အား နဲ့မာန် နဲ့လိုး ဆောင့်ပေး ပါ ပြီ...။ ( ယု မာ...) ( အင်..ကို ညီ...) ( ယု မာ စောက် ပတ် က ကောင်း လှ ချည် လား.....) ( ကြိုက် လား..ကို ညီ...) ( ကြိုက် တယ်...အ ရမ်း ကြိုက် တယ်...) ( ကြိုက် ရင် လိုး....ဆောင့် ....တ အား ဆောင့်ပေး ကွယ်...) ( ဒို့လီး ကို ရော ကြိုက် ရဲ့လား...) ( ကြိုက် တယ်....အ ရမ်း ကြိုက် တယ်...) ( ဘာ ကို ကြိုက် တာ လဲ....) ( လီး ကြီး ကို လေ..ကို ညီ့လီး ကြီး ကို ....) ကို ညီ တ အား..ဆောင့်တာ ဒ လ စပ်...။ ယု မာ ( ပြီး ) သွား ရ တယ်..။ တ အား ကောင်း တာ...။ ( အီး...ပြီး...ပြီး....သွား..........အား....အီ.........အီး....ကောင်း.... ကောင်း လိုက် တာ...) 17 ကို ညီ က ယု မာ ပက် လက် လန် ကျ ပြီး တ အင်း အင်း ညည်း နေ တာ ကို ခ ဏ စောင့်ပြီး... ( ကို့ကို ကုန်း ပေး မ လား..ယု မာ..) လို့ပြော လိုက် တယ်..။ ယု မာ လဲ ကို ညီ ခိုင်း သ လို လေး ဘက် ထောက် ကုန်း ပေး လိုက် ပြီးဖင် တွေ ကို မြင့်မြင့်ထောင် ပေး လိုက် ပါ တယ်..။ ကို ညီ က ယု မာ ဖင် ကား ကား တွေ အ နောက် မှာ ရပ် ပြီး ခါး ကို လက် ၂ ဖက် နဲ့ဆုတ် ကိုင် ပြီး ယု မာ စောက် ပတ် ထဲ ကို သူ့လီး ကြီး ထိုး သွင်း လိုက် ပါ တယ်..။ လီး ကြီး က တ ဖြေး ဖြေး ချင်း တ ဆုံး ၀င် လာ တယ်...။ တ ချက် ၂ ချက် ဖြေး ဖြေး ချင်း ထိုး ညှောင့်နေ တယ်..။ ( ယု မာ.. ခပ် ပြင်း ပြင်း လုပ် မယ် နော်...) ( အင်း..လုပ်...လုပ် ...ကို..စိတ် ကြိုက် လိုး ... ကို.. ယု မာ ကို တ အား သာ လိုး....) ကို ညီ လဲ ယု မာ ကို လိုး ပါ ပြီ..။ ဒီ ပုံ စံ က လိုး သူ ယောင်္ကျား တွေ အ တွက် မိန်း မ ရဲ့ဖင် ကို ရော ဖင် ကြား က ပြူး ထွက် နေ တဲ့စောက် ဖုတ် ကိုေ၇ာ တွေ့နေ ပြီး လိုး ရ တာ ကြောင့်အ ရမ်း အ ၇ သာ ရှိ တယ် လို့ယု မာ ကြား ဘူး တယ် ..။ ကို ညီ အား ရ ပါး ရ လိုး ဆောင့်တယ်..။ ဒ လ စပ် ဆောင့်တယ်..။ အ သံ တွေ တ အား မြည် တယ်...။ ဖွတ် ဖွတ် ဖပ် ဖပ် နဲ့ ..။ တ ချက် တ ချက် စောက် ပတ် ထဲ က လီး ထုတ် တဲ့အ ခါ လဲ ဘွတ် က နဲ လေ သံ ကြား လိုက် ရ တယ်...။ တော် တော် ကြာ ဆောင့်တော့ယု မာ လဲ တ ကြိမ် ထပ် ပြီး ရ ပြန် တယ်..။ ကို ညီ လဲ သုတ် တွေ ယု မာ စောက် ပတ် ထဲ ပန်း ထုတ် လာ တယ်..။ ပါး စပ် က လဲ...( အိုး...အား.......ကောင်း...ကောင်း..လိုက် တာ...ယု မာ ရယ်...) လို့ညည်း လိုက် ပါ တယ်...။ နှစ် ယောက် သား ကု တင် ပေါ် ဘယ် လောက် ကြာ အောင် လှဲ နေ မိ တယ် မ သိ တော့ ..။ ပြူ တင်း ပေါက် က မျက် နှာ ချင်း ဆိုင် က အ ကင် ဆိုင် လေး က နီ ရွန် မီး ရောင် နီ နီ ကို တောင် တွေ့နေ ရ ပြီ..။ အ ပြင် မှာ မှောင် နေ ပြီ ဘဲ..။ ကို ညီ က ယု မာ ကို လှမ်း ဖက် လိုက် တယ် ..။ ( ယု မာ ရယ် ...ကျေး ဇူး တင် တယ်...ကို ...ဆက်စ် မ လုပ် တာ ကြာ နေ ပြီ....နှစ် နဲ့ချီ နေ ပြီ...သိပ် ကောင်း တာ ဘဲ...) ( ယု မာ လဲ ကောင်း တာ မှ အ ရမ်း....ယု မာ ကို တောင်း ရော ပေါ့ ...ကို ရယ်...ယု မာ က လေ...ကို သာ တောင်း မယ် ဆို ရင် ပေး ဖို့အ ဆင် သင့်ပါ .. ဟိုး..ငယ် ငယ် ထဲ က ကို့ကို စိတ် လှုပ် ရှား နေ တာ ...သိ လား..) ( ဟင်...ဟုတ် လား...) ( ဒါ ပေါ့ ..တ ခါ မှတ် မိ လား...ကို က..ယု မာ ကို ကျောင်း လာ ကြို တယ် လေ ...မိုး တွေ က သဲ သဲ မဲ မဲ ရွာ ချ လို့ကို က ယု မာ ကို ထီး နဲ့လာ ကြို တာ..ယု မာ နဲ့ကို ပူး ကပ် နေ တာ... ရင် ခုန် တာ အ ရမ်း ဘဲ..အဲ ဒီ တုံး က ယု မာ ကား ထဲ အ ၀င် မိုး စို လို့အ သား နဲ့ကပ် နေ တဲ့ယု မာ ဖင် တွေ ကို ကို ကြည့်ပြီး တံ တွေး မြို ချ တာ ယု မာ မြင် လိုက် တယ် ...ကို လဲ ယု မာ ဖင် တွေ ကို သ ဘော ကျ နေ တယ် ဆို တာ ယု မာ သိ လိုက် တာ ပေါ့ .....) ( ယု မာ ဖင် တွေ က တ ကယ့်ကို လှ တာ ..ဟင်း....) ( ကို ကြိုက် လား...) ( အ ရမ်း ကြိုက် တာ ပေါ့ .....စောက် ပတ် က လဲ သိပ် လှ တာ ဘဲ...) ( ဟင်း ဟင်း...လှ တယ် လို့ဘဲ ရှိ ရ သေး လား ကို ရယ်.....) ( တ ကယ်....နမ်း ချင် တယ်.....) ကို ညီ က ယု မာ ပေါင် ကြား ကို သူ့ခေါင်း ကို သွင်း လိုက် တယ်... ( အို..ကို...ကို..ရယ်........ယု မာ ခု န က အ ရမ်း ပေ ထား တာ လေ...ရေ ချိုး ပါ ရ စေ အုံး....) ( ဟင့်အင်း ...ရေ ချိုး ဖို့မ လို ဘူး ....) ( အို ......အာ...အ........ကို....ကို......) ကို ညီ လေ..ယု မာ စောက် ပတ် ကို ယက် လိုက် တာ တ ပြတ် ပြတ် နဲ့....။ ယက် ပေး တော့ယု မာ ပြန် ထန် လာ ရ တယ် ...။ ယု မာ ကို သူ ယက် နေ တာ လား..ယု မာ က ဘဲ သူ့မျက် နှာ ကို စောက် ပတ် နဲ့ပွတ် နေ တာ လား မ သိ တော့ ...။ ( ကို ရယ်...ယု မာ ကို လိုး ပေး ပါ တော့ ...) လို့တောင်း ဆို ရ ပါ တော့တယ်....။ ယု ယု မာ မ န္တ လေး ရောက် ခဲ့ပေ မဲ့သူ ငယ် ချင်း မီ မီ ဘ တုတ် နဲ့မ တွေ့ခဲ့နိုင် တော့..။ ကို ညီ နဲ့နေ့ရော ည ရော အ ချစ် စ ခန်း ဖွင့်နေ ရ လို့ပါ...။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ခိုင် ချို မာ 18 ( အန် တီ မေ ဘယ်လ် တို့ဆီ ကို သွား ဖို့..ဗီ ဇာ ကျ ပြီ...ယု မာ ....) ( ဟယ်..ဟုတ် လား..မ မ ကြီး ....တယ် ဟုတ် ပါ လား..ဗီ ဇာ က အ ရမ်း ခက် တယ် ဆို...မ ကြီး ကို ဘယ် သူ လုပ် ပေး တာ လဲ....) ( ဘယ် သူ မှ မ လုပ် ပေး ပါ ဘူး..ကို ညီ့ဆိုင် တွေ နဲ့ဒို့နေ တဲ့အိမ် ..ဗိုလ် အောင် ကျော် လမ်း က အ ခန်း ..အက်ဖ် အမ် အိုင် က တိုက် .. ဒါ တွေ ပိုင် ဆိုင် ကြောင်း ပြ တယ်..ပြီး တော့ငါ့ဆိုင် လဲ ပြ တာ ပေါ့ ..ယုံ ပါ တယ်..ပြန် လာ မယ် ဆို တာ....) ( ဘယ် ရက် လောက် ထွက် ဖြစ် မ လဲ....) ( ရှေ့အ ပတ် ထဲ ပေါ့ ..ယု မာ ..ငါ့အိမ် သွား စောင့်ပေး မယ် မ ဟုတ် လား...) ( အင်း လေ...ယု မာ ပြော ပြီး ပြီ ဘဲ ...က လေး တွေ အ တွက် စိတ် ချ ...မ ကြီး က ၁ လ လောက် ကြာ မှာ လား....) ( အင်း ..မ သိ သေး ဘူး ..အ လုပ် လေ့လာ စ ရာ တွေ ရှိ သေး လို့အ သွား မှာ စင် ကာ ပူ ခ ဏ ၀င် အုံး မှာ...) ( အင်း..ယု မာ လဲ လိုက် ချင် လိုက် တာ...မ ကြီး ရယ်....) ( မ သွား ခင် မှာ စ ရာ တွေ ရှိ သေး တယ်..ငါ့အိမ် လာ နေ အုံး နော် ယု မာ.....) ( လာ မယ် ...မ ကြီး...) ခိုင် ချို မာ ဖုန်း ချ လိုက် တယ်..။ သူ့ လက် ထောက် အိ အိ စိုး သူ့ရုံး ခန်း ထဲ ၀င် လာ တယ်..။ ( မ မ ..ထ မင်း စား တော့မ လား...) ( မ စား တော့ဘူး ..အိ စိုး ဘဲ စား လိုက် တော့..မ မ အ ပြင် သွား စ ရာ ရှိ သေး လို့ ...) ခိုင် ချို မာ ကို ညီ ဆီ ဖုန်း ခေါ် လိုက် တယ်..။ ( ကို ညီ...ဗီ ဇာ ကျ ပြီ ... ရှေ့အ ပတ် သွား တော့မယ်...) ကို ညီ နဲ့ခိုင် ချို နောက် ပိုင်း စ ကား အ ပို သိပ် မ ပြော တော့..။ အ ကြောင်း ရှိ မှ ဘဲ ပြော ဖြစ် ကြ တယ်..။ ကို ညီ နဲ့ပြော ပြီး တော့ခိုင် ချို အ ပြင် ထွက် ခဲ့တယ်..။ အန် တီ မေ ဘယ်လ် တို့အ တွက် မြန် မာ ပြည် လက် ဆောင် ၀ယ် ဖို့ပါ..။ ဆိုင် အ ပြင် ကို ရောက် တာ နဲ့စော စော က ကြို ပြော ထား လို့ကား မောင်း တဲ့ဦး လေး စံ က ဆိုင် ရှေ့မှာ ကား တံ ခါး ဖွင့်ပြီး အ ဆင် သင့်စောင့်နေ တယ်..။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ခင် မေ ကျင် ကျင် ကျင် ဦး မျိုး ၀င်း လှည်း တန်း ဆိုင် က ပြန် ရောက် လာ လဲ ဆ ရာ ဖေ ၀င်း မောင် ရဲ့လက် ထောက် အ ဖြစ် နဲ့ သူ့ရုံး ခန်း မှာ ဘဲ နေ ရ လုပ် ရ တယ်..။ မ န္တ လေး မှာ ဆိုင် သစ် ဖွင့်ဖို့ဦး မျိုး ၀င်း က တာ ၀န် ယူ နေ ရ တယ် ..။ ကျင် ကျင် ဆ ရာ ဖေ ၀င်း မောင် နဲ့လုပ် ရ တာ ပျော် ပါ တယ်..။ သူ က လူ ကောင်း..စိတ် သ ဘော ကောင်း တဲ့လူ ကြီး လို့ကျင် ကျင် ထင် တယ် ...။ ကျင် ကျင့်အ ပေါ် သိပ် ကောင်း တယ် ...။ သူ အ လုပ် ကိ စ္စ နဲ့နယ် သွား ရင် ....ကျင် ကျင် ရုံး မှာ တ ယောက် ထဲ ..။ ဖုံး ထူး ပြီး အ ရေး ကြီး ရင် သူ့ဟမ်း ဖုန်း ကို ခေါ် ပြီး ပြော ပြ ရ တယ်..။ တ ခု ရှိ တာ က ဆ ရာ ကျင် ကျင့်နောက် ပိုင်း ကို စူး စိုက် ပြီး ကြည့်တာ ကျင် ကျင် ခ ဏ ခ ဏ သ တိ ထား မိ တယ်...။ ကျင် ကျင့်ကိုယ် လုံး တောင့်တင်း တာ ကို ဆ ရာ သ ဘော ကျ နေ တယ် ထင် တယ်...။ ကျင် ကျင် လဲ ကျင် ကျင့်ကိုယ် လုံး တောင့်တယ် ဆို တာ ကိုယ့်ကို ကိုယ် သိ ပါ တယ်..။ ကျင် ကျင့်မှာ ရီး စား ရှိ တယ် လို့စ ကား ကြုံ ရင်း ပြော ပြ လိုက် တော့ဆ ရာ မျက် နှာ ကွက် က နဲ ပျက် သွား ခဲ့တာ ကျင် ကျင် သ တိ ထား မိ ဘူး တယ် .....။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ဖေ ၀င်း မောင် ( ခေါ် ) ကို ညီ 19 နေ ပြည် တော် မှာ မ ထင် မ မှတ် ဘဲ ယု မာ နဲ့တွေ့ကြ ပြီး သူ နဲ့ ယု မာ အိပ် ဖြစ် သွား ကြ တယ်..။ အဲ ဒီ နေ့က ယု မာ ရဲ့ဟို တယ်လ် မှာ ၃ ချီ တောင် လုပ် ဖြစ် သွား ကြ တယ်..။ အ သက် ၄၅ နှစ် မှာ မ လုပ် ရ တာ ကြာ လွန်း ပြီး စိတ် တွေ က အ ရမ်း ပြင်း ထန် ပြီး ယု မာ က လဲ သူ့ကို အ လို လိုက် ခဲ့တော့မီး ကုန် ယမ်း ကုန် ဖြစ် သွား ခဲ့တယ်..။ နောက် တ နေ့စော စော ထ ပြီး မန္တ လေး သွား ဖို့လုပ် ထား တာ မ ထ ဖြစ် ကြ ဘူး..။ ၂ ယောက် စ လုံး ဒီ လို ဖြစ် တာ မှား သွား တယ် လို့စိတ် ထဲ မ ဖြစ် မိ ကြ ဘူး..။ ဒါ ပေ မဲ့လူ မ သိ အောင် လှို့ဝှက် ကြ ဖို့တိုင် ပင် ကြ တယ်..။ မ န္တ လေး ကို ဖေ ၀င်း မောင် ရဲ့ကား နဲ့နေ့လည် လောက် မှ ထွက် ဖြစ် ကြ တယ်..။ သူ တို့၂ ယောက် အ ရမ်း သဲ နေ ခဲ့ကြ တယ်..။ မန္တ လေးေ၇ာက် တဲ့အ ထိ မ အောင့်နိုင် ကြ ဘဲ လမ်း မှာ ခ ဏ ၀င် ရ တယ်..။ ယု မာ လဲ သူ့လီး ကို ဘယ် နှာ ခါ မှန်း မ သိ အောင် ဘဲ ခ ဏ ခ ဏ စုပ် ပေး လိုက် ဆုတ် ကိုင် ကွင်း ထု ပေး လိုက် နဲ့အ ရမ်း သူ့ကို ပြု စု တာ ဘဲ..။ မ န္တ လေး ရောက် တော့သူ တို့ဟို တယ်လ် မှာ မ တည်း ဘူး..။ ဖေ ၀င်း မောင် ပိုင် တဲ့ကွန် ဒို တိုက် ခန်း တ ခန်း မှာ သူ တို့တ နေ ကုန် တ ည လုံး ( လိုး) ကြ တယ်..။ ယု မာ နဲ့သူ ရန် ကုန် ရောက် ရင် ဒီ လောက် လွတ် လွတ် လပ် လပ် တွေ့နိုင် ကြ ဖို့က မ လွယ် ဘူး လေ...။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ မ ဝေ နဲ့ဖေ ၀င်း မောင် ခိုင် ချို မာ မ နေ့က ထွက် သွား ပြီ ..။ ဖေ ၀င်း မောင်..ယု ယု မာ ..သား နဲ့သ မီး ..မျိုး ၀င်း တို့လေ ဆိပ် လိုက် ပို့ကြ တယ် ..။ စင် ကာ ပူ မှာ ၂ ရက် လောက် နေ မယ် တဲ့ ..။ ယု ယု မာ က ဖေ ၀င်း မောင် အိမ် မှာ လာ နေ နေ ပြီ..။ ယု ယု မာ ရဲ့ယော င်္ကျား ကို စည် သူ လဲ တ ရုပ် ပြည် ခ ရီး ထွက် သွား တာတ ပတ် လောက် ၇ှိ ပြီ ..။ ဖေ ၀င်း မောင် လေ ဆိပ် က ပြန် လာ တော့သား နဲ့သ မီး က ဒင်မ် ဆမ်း စား ချင် ကြ တယ် ဆို တာ ကြောင့်ဝင် စား ကြ တယ် ..။ ဒင်မ် ဆမ်း ဆိုင် ထဲ အ ၀င် သား နဲ့သ မီး..မျိုး ၀င်း တို့က ရှေ့က ၀င် သွား ကြ တော့ယု ယု မာ နဲ့သူ ကား ဆီ က ဆိုင် အ ပေါက် ထဲ အ ၀င် လူ လစ် တာ နဲ့ယု ယု မာ ကို သူ စ ကား စ လိုက် တယ်..။ ( ယု မာ...သိပ် တွေ့ချင် နေ တယ်...) ( ယု မာ ရော ဘဲ....) ( တ နေ ရာ မှာ တွေ့ကြ ရ အောင် ...) ( ည ကျ ရင် ကို့အ ခန်း လာ ခဲ့မယ် လေ ...) ( နိုး ..လွတ် လွတ် လပ် လပ် တွေ့ချင် တာ...) ( အင်း လေ..ဖုန်း ခေါ် လိုက် မယ်....) ယု ယု မာ သူ့ရှေ့က သွား လိုက် တော့ခါး သေး သေး နဲ့အဲ ဒီ အောက် က တင် တွေ ကို သူ ကြည့်ပြီး တပ် မက် စိတ် က များ နေ တယ်..။ သူ လဲ နေ ပြည် တော် နဲ့မ န္တ လေး မှာ တ ၀ စား ပြီး ခဲ့တာ တောင် စိတ် က အ လွန် အ မင်း တပ် မက် နေ တုံး ဘဲ ...။ ယု ယု မာ ကို ထန် ခဲ့တဲ့စိတ် နဲ့အ လုပ် ကို ထွက် ခဲ့ တော့..အ လုပ် လဲေ၇ာက် ရော ခင် မေ ကျင် က လဲ တင် အ လှ ပေါ် လွင် စေ တဲ့အ သား ကျော့ကျော့ထ မိန် နဲ့ခါး တို မြန် မာ အ င်္ကျီလေး နဲ့ဆို တော့ခင် မေ ကျင် လမ်း လျောက် ရင် တင် တွေ က တုံ တုံ တုံ တုံ နဲ့ .. မြင် ရ တာ ရင် မော စ ရာ ဖြစ် နေ တယ်...။ ခင် မေ ကျင် ရဲ့တင် ပါး က ပင် တီ ဘောင်း ဘီ အ ရာ လေး တွေ က လဲ ထင်း နေ တယ် ...။ ဒီ အ တိုင်း ဆို ရင် ခင် မေ ကျင် ကို သူ့ရုံး မှာ ထား လို့မ ဖြစ် တော့ဘူး လို့ဖေ ၀င်း မောင် စဉ်း စား နေ တယ် ..။ ဘာ လို့လဲ ဆို တော့သူ ခင် မေ ကျင့်ကို သ ဘော ကျ နေ လို့ပါ ဘဲ ...။ ဒီ အ တိုင်း ဆို မ လွယ် ဘူး ....။ သူ့ဟမ်း ဖုန်း မြည် လာ တယ် ...။ ယု ယု မာ ...ဆက် တာ ...။ ခင် မေ ကျင် မ လှမ်း မ ကမ်း မှာ ရှိ နေ တာ ကြောင့်တ ဖက် က ယု ယု မာ ဆို တာ မ သိ စေ ချင် ဘူး ...။ ( ကို ညီ ....ယု မာ ..ပါ...) ( အင်း ...ဘယ် က ဆက် တာ လဲ..အ လုပ် က လား ....) ( အင်း..အ လုပ် က ..တွေ့ချင် တယ် ..ကို ညီ့ကို ....အ ရမ်း တွေ့ချင် တာ ...လွမ်း နေ တာ ကြာ ပြီ ...ည ကျ ရင် တော့ကို့အ ခန်း လာ ခဲ့မယ် ...) ( အ ခု တွေ့လို့မ ရ ဘူး လား .....) ( တွေ့ချင် တာ ပေါ့...တတ် နိုင် ရင် နေ ပြည် တော် တုံး က လို ဘဲ တ ည လုံး တ နေ့လုံး ..ဟင်း .....) 20 ( ဟို တယ် တ ခု ခု သွား လိုက် ကြ မ လား ...) ( ည ကျ မှ ကို ရယ် ...ယု မာ အ ခု အ လုပ် တွေ က ရှိ နေ သေး တယ် ...ဟင်း...ဒါ ဘဲ ကွာ...) ယု ယု မာ ဖုန်း ချ သွား တယ် ...။ ဖေ ၀င်း မောင် ယု မာ ညု တု တု တွေ ..ဖီ လင် တက် သံ နဲ့ပြော တော့ပေါင် ကြား က ဟာ ကြီး က ထောင်း က နဲ မတ် သွား တယ် ..။ ခက် တော့တာ ဘဲ..။ ယု မာ နဲ့စ ကား ပြော ခါ မှ ပို ဆိုး နေ ပြီ ...။ ဟမ်း ဖုန်း က မြည် လာ ပြန် တယ် ..။ ဖုန်း ကို လှမ်း ကြည့်လိုက် တော့..အိုး ...မ ဝေ ... မ ဝေ ရဲ့နံ ပါတ် .. ။ မ ဝေ က သူ့ကို တွေ့ချင် တယ် တဲ့..။ အ ရေး ကြီး လို့ပြော တာ ဘဲ ...။ ခင် မေ ကျင့်ကို မှာ စ ရာ မှာ ခဲ့ပြီး သူ မ ဝေ အိမ် ကို သွား တယ် ..။ ဘာ ဖြစ် ပြန် လဲ မ သိ ဘူး ...။ မ ဝေ တ ယောက် ထဲ ..။ အိုး ..မ ဝေ က တော် တော် ဟော့တ် တယ် ..။ ၀တ် ထား တာ က ပါး လွန်း ရ တဲ့အ ထဲ ဘ ရာ က မ ပါ ဘူး...။ ( ကို ညီ ...ဒီ ဒီ ဗွီ ဒီ အ ချပ် က ကို ကို ကျော် ရဲ့ကား ထိုင် ခုံ အောက် က တွေ့တာ ....ကြည့်လိုက် ပါ အုံး ...) မ ဝေ က ဒီ ဗွီ ဒီ စက် အ သေး စား လေး ထဲ ထည့်ပြီး ဖေ ၀င်း မောင် ကို ပြ တယ် ...။ ကို ကို သူ့ဖါ သာ ထ ရိုင် ပေါ့ တ် ထောင် ပြီး ရိုက် ထား တာ ဘဲ ...။ တ ကယ့်ကို ကို ကို ကောင် မ လေး တ ယောက် နဲ့ကဲ ထား တဲ့အ ပြာ ရုပ် ရှင် ဖြစ် နေ တယ် ...။ ( ယူ့အ ကို တော့ဦး နှောက် ထဲ ပိုး ရောက် သွား ပြီ ထင် တယ် ..ကြည့်ပါ အုံး ကို ညီ..ကောင် မ လေး ကို ကုန်း ပြီး ယက် ပေး နေ လိုက် တာ များ ....) မ ဝေ နဲ့သူ အ ပြာ ရုပ် ရှင် အ တူ ကြည့်နေ ကြ ပါ လား ဆို တဲ့အ သိ ၀င် လာ တယ် ..။ မ နက် ထဲ က သူ စိတ် တွေ ပြင်း ထန် နေ တာ ..။ တ ဏှာ ကြီး နေ တာ ..။ အ လုပ် ရောက် တော့လဲ အ သဲ ယား စ ရာ ဖင် တုံ ခါ နေ တဲ့ခင် မေ ကျင် က လဲ စိတ် ပြစ် မှား ချင် စ ရာ ..။ သူ တို့ကြည့်နေ တုံး ဘဲ ကောင် မ လေး က စုတ် ပေး နေ ပြန် တယ် ...။ မ ဝေ က သူ့န ဘေး မှာ ထိုင် နေ ရာ က သူ့ပေါင် ကို လက် တ ဖက် နဲ့ကိုင် ဆုတ် လိုက် တယ် ..။ ( ကြည့်ပါ အုံး ကို ညီ ....ကောင် မ က လျာ နဲ့ထိုး က လိ နေ တာ ...ဒါ ကြောင့်လဲ ကို ကို ကျော် ခိုက် သွား တာ နေ မှာ ..အင်း လေ.. မ ဝေ လဲ သူ့ကို ဒီ ထက် တောင် မှုတ် ပေး ခဲ့တာ ပါ ....) ပြော နေ ရင်း မ ဝေ လက် ချောင်း တွေ က သူ့ပေါင် ကို ပွတ် နေ တယ် ..။ ( ကို ညီ ....) ( ဟင်...မ ဝေ...) ( မ ဝေ ကို ခွင့်ပြု တော့ကွာ ...) ( ဘာ ကို လဲ မ ဝေ...) ( ကို ညီ့ကို မ ဝေ ...ပု လွေ ကိုင် ချင် တယ် ...) ( အာ...မ ဝေ က လဲ ..မ ကောင်း ပါ ဘူး ဗျာ ....) မ ဝေ လက် က သူ့လုံ ချည် ကြား ထဲ လိုက် စမ်း နေ တယ်...။ သူ့လီး က လဲ တောင် ချင် နေ တာ .. မာ ပြီး ငေါ ငေါ ကြီး စ ဖြစ် နေ ပြီ ..။ မ ဝေ က လီး ကို ဆုတ် ကိုင် နေ ပြီ ...။ ( ဘာ လို့မ ကောင်း ရ မှာ လဲ...ကို ညီ လဲ လို အပ် နေ တာ မ ဝေ သိ နေ တာ ဘဲ..ခိုင် ချို က လဲ မ ပေး တာ ကြာ ပြီ မ ဟုန် လား....) မ ဝေ သူ့လုံ ချည် ကို ဖြေ ချွတ် နေ ပြီ ....။ မ ဝေ ကြမ်း ပြင် ပေါ် ဆင်း ထိုင် လိုက် တယ် ..။ လုံ ချည် ကို မ ဝေ ဆွဲ ချွတ် လိုက် တော့ဖေ ၀င်း မောင် ရဲ့လီး တန် ကြီး က ဒိန်း က နဲ တောင် မတ် လာ တော့တယ် ...။ မ ဝေ က ( သန် မာ လိုက် တဲ့ဟာ ကြီး ကွယ် ..မ ဝေ ကြိုက် တယ် ကွယ် ..) ဆို ပြီး ဆုတ် ကိုင် ပြီး နှုတ် ခမ်း ထူ ထူ တွေ ကြား ငုံ ပြီး စ စုတ် ပေး ပါ တော့တယ်....။ ဝေ ဝေ ပေါ် ဦး လီး စုတ် တာ သိပ် တော် တယ် ဆို တာ ဖေ ၀င်း မောင် ကြား ဖူး နေ တာ ကြာ ပါ ပြီ ...။ အဲ ဒါ တ ကယ့်ကို မှန် တဲ့စ ကား ဆို တာ သူ အ ခု လက် တွေ့ယုံ ကြည် သွား ရ ပါ ပြီ ....။ အာ..ပါး...ပါး... ကောင်း လှ ချည် လား မ ဝေ ...ရယ် ...။ မ ဝေ အား ရ ပါး ရ က လိ ပေး ..စုတ် ပေး ပါ ပြီ ...။မ ဝေ လျာ က ပြေး နေ တယ်..။ သူ့လိင် တန် တ လျောက် ပြေး နေ တာ ....။ ပတ် နေ တယ် ..ထိုး တယ် ...။ မ ဝေ စုတ် တာ ကို ခ ဏ ရပ် လိုက် ပြီး အ င်္ကျီကို ချွတ် ပစ် လိုက် တယ် ..။ အိုး ...မ ဝေ သူ့ရင် သား တွေ ကို ဖေ ၀င်း မောင် ကို ပြ ချင် နေ ပုံ ရ တယ် ..။ မ ဝေ နို့၂ လုံး က တင်း မာ လုံး ၀န်း နေ တုံး ဘဲ...။ ( ကြိုက် လား ..) မ ဝေ က သူ့ကို စိုက် ကြည့်ပြီး လီး ကို ဆက် စုပ် ပေး ပြန် တယ် ...။ စုတ် တာ ထိ လွန်း လို့ဖေ ၀င်း မောင် ပြီး သွား မှာ တောင် စိုး ပြီး.... 21 ( မ ဝေ..တော် ပြီ ...ပြီး သွား လိမ့်မယ် ...) လို့တား လိုက် မိ တယ် ....။ မ ဝေ က ( ကြိုက် လား ကို ညီ ...) လို့ပြုံး ပြီး မေး တယ် ...။ ဖေ ၀င်း မောင် ဒီ လို မ ဖြစ် ရ အောင် မ ဝေ ကို ရှောင် တာ နှစ် တွေ ကြာ ခဲ့တာ ..။ မ ဝေ ခေါ် တာ မ လာ လိုက် ရင် ကောင်း သား . မ ဝေ က သူ့စ ပို့ရှပ် ကို လာ ချွတ် ပေး တယ် ..။ ဖေ ၀င်း မောင် ကိုယ် လုံး တီး ဖြစ် သွား ပြီ ..။ မ ဝေ က သူ့ထ မိန် ကို လဲ ချွတ် လိုက် တယ် ..။ ဖေ ၀င်း မောင် မ ဝေ ကို ဆို ဖါ ပေါ် ထိုင် ခိုင်း လိုက် တယ် ..။ မ ဝေ လဲ ထိုင် ချ လိုက်ေ၇ာ သူ မ ဝေ ပေါင် တွေ ကို ဆွဲ ကား လိုက် တယ် ..။ ဖြဲ လိုက် တယ် ..။ ကြမ်း ပြင် မှာ ဒူး ထောက် လိုက် ပြီး မ ဝေ ရဲ့ဖေါင်း မို့တဲ့စောက် ပတ် ကို သူ ငုံ့နမ်း လိုက် တယ် ...။ နှာ ခေါင်း နဲ့နမ်း တာ ...။ သူ့လက် ၂ ဖက် လုံး က မ ဝေ နို့၂ လုံး ကို တ လုံး စီ တ ဖက် တ လုံး ကိုင် လိုက် တယ် ...။ လက် ချောင်း တွေ က နို့သီး ခေါင်း တွေ ကို ဖွ ဖွ လေး ချေ ပါ တယ် ..။ ဒီ အ ချိန် မှာ သူ့နှုတ် ခမ်း တွေ က မ ဝေ စောက် ပတ် ထိပ် က စောက် စိ ကို နမ်း စုတ် နေ ပြီ ...။ မ ဝေ ...ညည်း လိုက် တာ က ..( ကို ညီ .....ကြိုက် လိုက် တာ ကွယ် .....) တဲ့ ...။ ဘာ ဘဲ ပြော ပြော မ ဝေ ကို သူ ကူ ညီ ရာ ရောက် ပါ တယ် ..လို့သူ တွေး ပြီ စိတ် ဖြေ လိုက် တယ် ..။ ကို ကို က မ ဝေ ကို စွန့်ခွါ သွား ပြီ ဘဲ လေ ..။ မ ဝေ လဲ သူ့လို ဘဲ ဆာ မှာ ပေါ့ ...။ လျာ နဲ့စ ယက် ပေး ပါ ပြီ ...။ မ ဝေ ..( အင်း...အင်း...အင်း ......) နဲ့ညည်း နေ ပြီး မျက် စိ လေး မှိတ် ထား တယ် ...။ နှုတ် ခမ်း သား လေး နှစ် ဖက် ကြား ကို သူ့လျာနဲ့ထိုး ခွဲ ကာ အ ထဲ ကို က လော် လိုက် တယ်...။ ( အာ.....အ ...အ ...အို ......အို .....) မ ဝေ ဖင် ကြီး တွေ အောက် က လက် လျို ပြီး ဆုတ် ကိုင် ပြီး ယက် ပေး နေ တယ် ..။ ( အို ..ကို ညီ ရယ် ....... အင်...ဟင်...ကောင်း လိုက် တာ .......) မ ဝေ သိပ် ကြာ ကြာ ယက် ပေး တာ ကို မ ခံ နိုင် ..။ တ အား တ ဏှာ ကြွ လာ ပြီး ..( ကို ညီ ရယ် ...မ ဝေ ..မ နေ နိုင် တော့ဘူး ....လုပ်...လုပ် တော့ကွယ် ......လုပ် ကြ ရ အောင် ....) လို့တောင်း ဆို ပါ တယ် ...။ ကို ညီ လဲ ဆို ဖါ မှာ တင် မ ဝေ ခြေ ထောက် တွေ ကို မ တင်ပြီ သူ့ပု ခုံး ပေါ် တင် လိုက် ပြီး မ ဝေ စောက် ပတ် ထဲ တေ့သွင်း လိုက် တယ် ...။ ( အင်း............) ဖေ ၀င်း မောင် ..မ ဝေ ကို ဖြေး ဖြေး မှန် မှန် တ ချက် ချင်း လိုး နေ ရင်း ..ခု ထိ အံ့သြ နေ ဆဲ ဘဲ ...။ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ဖေ ၀င်း မောင် နဲ့ယု ယု မာ ဖေ ၀င်း မောင် မ ဝေ အိမ် က သူ့ရုံး ခန်း ပြန် ရောက် တော့ည နေ စောင်း နေ ပြီ ...။ ခင် မေ ကျင် က သူ ဖုန်း ပြန် ဆက် ရ မဲ့နံ ပါတ် တွေ ပေး တယ် ...။ မ န္တ လေး က ဖုန်း ခေါ် တယ် ...။ သူ ပြန် ခေါ် လိုက် တယ် ...။ ဆိုင် ဖွင့်ဖို့ကိ စ္စ သူ လာ ခဲ့ပါ အုံး လို့ခေါ် တာ ..။ ခင် မေ ကျင် ခု ထိ ထ မင်း မ စား ရ သေး ဘူး တဲ့...။ ဖေ ၀င်း မောင် ခင် မေ ကျင် ကို ည နေ စာ လိုက် ကျွေး တယ် ..။ ခင် မေ ကျင် ကို အိမ် ရှေ့အ ထိ လိုက် ပို့ပေး လိုက် တယ် ..။ သူ ကား ပြန် မောင်း လာ ရင်း ... နေ့လည် က မ ဝေ နဲ့လိုး ကြ တာ ကို ပြန် မြင် ယောင် နေ တယ် ...။ မ ဝေ နဲ့သူ ...ကြောင် ခံ တွင်း ပျက် နဲ့ဇ ရက် တောင် ပံ ကျိုး ဆို တာ မျိုး လို့ပြော ရ မ လား ..။ ပြတ် လပ် နေ တဲ့သူ နှစ် ယောက် ..လိုး ကြ ပြီ ဆို တော့ ပွဲ က ကြမ်းေ၇ာ ပေါ့..။ ဖေ ၀င်း မောင် မ ဝေ ကို သူ ကောင်း ကောင်း လိုး ပေး ခဲ့ရ တာ ကို တော့ကျေ နပ် မိ တယ် ..။ မ ဝေ ကို သူ သ နား တယ် ..။ မ ဝေ ကို ဖင် ကုန်း ခိုင်း ပြီး လိုး တော့ကို ကို မဝေ ကို အဲ လို ဘဲ ဖင် ကုန်း ခိုင်း ပြီး လိုး ခဲ့တာ သူ တွေ့ဘူး ခဲ့တာ ပို ပြန် မြင် ယောင် တယ် ...။ အ နောက် က သူ လိုး ဆောင့်လိုက် တိုင်း ဖင် တုံး တွေ က တုန် တုန် သွား ကြ တယ် ..။ တော် တော် အား ရ စ ရာ ကောင်း တယ် ..။ မ ဝေ က လူ ချင်း ခွဲ ခါ နီး ( ကို ညီ ရယ်..အီ ဆိမ့်နေ အောင် ကောင်း တယ် ....မ ဝေ..ကို ကို ကျော် ထား ခဲ့တာ နဲ နဲ မှ ၀မ်း မ နည်း ဘူး ..သိ လား .....ကို ညီ လိုး ပေး တာ သူ လိုး တာ ထက် မ ဝေ ကြိုက် တယ် ...) လို့ပြော ပါ တယ် ...။ ဖေ ၀င်း မောင် အိမ် ပြန် ရောက် တော့သား နဲ့သ မီး တို့ယု ယု မာ နဲ့ပီ ယာ နို တီး နေ ကြ တာ တွေ့ရ တယ် ...။ ဒေါ် ခင် စီ က ထ မင်း စား မ လား လာ မေး တယ် ..။ 22 သူ က စား ပြီး ပြီ ...ပြော လိုက် တယ် ...။ သူ့အ ခန်း က အ လုပ် စား ပွဲ မှာ ထိုင် လိုက် တော့ဖုန်း မြည် လာ တယ် ..။ ( ပြော ...မျိုး ၀င်း ..ဘာ ထူး လဲ ....) မျိုး ၀င်း မန္တလေး က ခေါ် တာ ပါ...။ မန္တလေး ကို လိုက် နိုင် ရင် ချက် ချင်း လိုက် ခဲ့ဘို့ပြော တယ်...။ အ ရေး တ ကြီး လုပ် စ ရာ တွေ ရှိ တာ ကြောင့်ပေါ့......။ သူ့ကွန်ပြူ တာ နဲ့လုပ် စ ရာ တွေ လုပ် တယ် ..။ ဘယ် လောက် ကြာ သွား မှန်း သူ မ သိ လိုက် ..။နာရီ ကြည့်လိုက် တော့၁၁ နာရီ ထိုး နေ ပြီ....။ ရေ ချိုး ချင် လာ သည်..။ ရေ ပူ ပူ နဲ့ရေ ပန်း အောက် မှာ ရေ ချိုး နေ တုံး ရေ ချိုး ခန်း တံခါး ပွင့်လာ တယ်...။ အို ...ယု ယု မာ ပါ လား ....။ ယု ယု မာ ရေ ပန်း အောက် ကို ၀င် လာ တယ် ..။ အ ၀တ် အ စား မ ပါ တဲ့ယု ယု မာ ကို သူ တွေ့တော့ စိတ် တွေ ထောင်း က နဲ ဖြစ် မိ ရ ပြန် တယ်...။ မ ဝေ နဲ့မီး ကုန် ယမ်း ကုန် လိုး ခဲ့ကြ တာ တောင် ယု မာ ကို သူ ဖက် လိုက် တဲ့ အ ချိန် မှာ သူ့လိင် တန် က မတ် မတ် တောင် နေ ပြီ...။ ယု ယု မာ က ထိုင် ချ လိုက် ပြီး သူ့လီး ကို စုတ် ပေး ပါ တော့တယ် ....။ေ၇ ချိုး ခန်း နံ ရံ ကို သူ လက် ၂ ဖက် နဲ့ကိုင် ရင်း ယု ယု မာ ရဲ့ပါး စပ် ထဲ လျာ နဲ့က လိ ပေး တာ ကို ခံ နေ ရ တယ် ...။ ယု ယု မာ က သူ့ဂွေး စိ ၂ လုံး ကိုလက် တ ဖက် နဲ့ဆုတ် ကိုင် ပြီး စုတ် ပေး နေ တယ်..။ တ ချက် တ ချက် ကောင်း လွန်း ပြီး သူ ယု ယု မာ ပါး စပ် ကို လိုး ထည့်နေ မိ ရ တယ် ....။ ယု ယု မာ အ စုပ် ကောင်း လွန်း လို့ပြီး တောင် ပြီး ခါ နီး ဖြစ် လာ တယ် ...။ (ယု မာ ....တော် ပြီ...ပြီး တော့မယ် ........ ) လို့ပြော ပြီး သူ မ ကို ဆွဲ ထူ လိုက် တယ်...။ မျက် နှာချင်း ဆိုင် ဖက် ထား ပြီး ရ မက် ထန် ထန် နှုတ် ခမ်း ချင်း စုတ် နမ်း လိုက် မိ တယ်...။ ယု ယု မာ က သူ့ခြေ ထောက် တ ဖက် ကို ရေ ချိုး ကန် ရဲ့ဘောင် ပေါ် တင် လိုက် ပြီး သူ့လီး ကိုသူ မ စောက် ဖုတ် ၀ မှာ တေ့ပေး လိုက် တယ် ...။ ဒစ် ၀င် သွား တဲ့အ ချိန် မှာ သူ့တင် ပါး တွေ ကို လက် ၂ ဖက် နဲ့ဆွဲ ယူ လိုက် တယ်...။ ပြီး တော့သူ မ ခါး လေး ကို ကော့ကော့ပေး ရင်း စ ပြီး လိုး တော့တယ်...။ သူ တို့၂ ယောက် ရဲ့ရ မက် ပြင်း တဲ့ညည်း သံ တွေ ဟာ ရေ ပန်း က ရေ သံ ကို တောင် သ တိ မ ထား မိ ကြ တော့ဘဲ စိတ် လွတ် ကိုယ် လွတ် လိုး နေ ကြ ရင်း ........ ဒီ တ ည တော့ည တာ ရှည် တော့မယ် ...။ နား ပါ ဦး မည် ...။
ဒီနေ့ မရင်မြတစ်ယောက်ထဲ တောထဲလာခဲ့ရတယ်..။ အိမ်ကလူကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ မနေ့ညက အရက်တွေ အသောက်လွန်ပြီး အရက်နာကျလို့ အိပ်ယာက မထနိုင်ဖြစ်ပြီး ...
ယောက္ခမနှင့် ချွေးမ လှလှ (အဆက်)
« ဇာတ်လမ်းအစသို့ လှလှ တို့သားအမိတွေ နိုးလာတော့ ယောက္ခမက သတင်းစာဖတ်နေပြီ။ လှလှက သူ့ကို မျက်လုံးချင်းတေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင် မကြည့်၊ နေ့စဉ်လုပ်နေ...
ကျွန်မနာမည်က ... လှမြတ်သူဇာနွယ် ... နာမည်ကလှတယ် မဟုတ်လားရှင် ... နာမည်က မဟာဆန်သလို ... လူကလည်း ... မဟာဆန်ပါတယ်ရှင် ... ကျွန်မလား ... အခုလ...
မေမိုး မျက်နှာလှလှလေးသည် အောင်စိုး၏ သူမကိုအာသာ ငမ်းငမ်း ကြည့်နေသော မျက်လုံးအစုံကို မြင်ပြီး ထိတ်ခနဲလန့်သွား မိသည်။ အောင်စိုးသည် သူမ ပျိုဖေ...
အတွင်းခံ ဘောင်းဘီက စတာ (အပိုင်း ၂)
ခင်ခင်ဇော်... ဒီနေ့ခင်ခင်ဇော်ကျူရှင်မရှိလို့အိမ်မှာထမင်းချက်နေသည် ရာသီဥတုနည်းနည်းပူလာတော့အိမ်နေရင်းအင်းကျီတစ်ထည်ဝတ်ပြီးတော့ လုပ်စရာရှိသည...
တင်ထားသမျှ ... ...
033.ဆံပင်ညိုညိုလေး(အပိုင်း ၄) ဇာတ်သိမ်း